2014 | မိုးသကျဦးလှငျ
ဘလော့မှာ ဘာပို့စ်မှလည်း မတင်တာကြာပါပြီ.။ လူကလည်း အလုပ်ရှုပ်နေတာရော အင်တာနက် လိုင်းမကောင်းတာကြောင့်လည်းပါတာပေါ့..။ အားလုံးကိုတော့ သတိရပါတယ်…။ တပ်ကနေ ပြောင်းသွား တဲ့အချိန် ဒီဖက်မှာ ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အလုပ်တွေ လုပ်နေရတာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ကိုယ့်ဝါသနာ နဲ့နီးတော့ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်.။ လောလောဆယ် ကျေနပ်တာက ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် ကျေရင် ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကို အပြည့်အဝ သုံးခွင့်ရတာလေး သဘောကျတယ်.။ ခုတော့ ဓာတ်ပုံတွေ ပြန်ရိုက်ဖြစ်နေတယ်.။
ဒီပုံက စနေနေ့ညက ရေပန်းဥယျာဉ်မှာ ရိုက်လာတဲ့ပုံ.။ Long Exposure ခေါ်တာပေါ့.။ Aperture အလင်းဝင်ပေါက်ရဲ့ ပိတ်ချိန်ကို ကြာပေးလိုက်တော့ ကြားထဲမှာစီးသမျှ ရေတွေကို အကုန်ဖမ်းထားလိုက်တဲ့သဘောပေါ့.။ တစ်ခုရှိတာက လှုပ်နေတာကိုရိုက်ရင် အဲဒီလို ရောသွားပါတယ်.။ ဆိုလိုတာက လူရိုက်လို့ မရဘူးပေါ့.။ Tripod တော့ သုံးရပါတယ်.။ (Click နှိပ်ပြီး ချဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်.
နောက်တစ်ပုံကတော့ လှေခွင်းတောင်မှာ ရိုက်လာတဲ့ပုံ.။ Ultra Wide Lens မရှိလို့ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ 18-200 Lens နဲ့ပဲ ရိုက်လာရတယ်.။ ဆိုးတော့ မဆိုးပါဘူး.။ 18 ဆိုတော့ တော်တော်လေး Wide ပါတယ်.။ မြစ်ပြင်က လှပေမယ့် အပေါ်က တွဲလောင်းကျနေတဲ့သစ်ရွက်တွေကို ရှောင်ရင်းနဲ့ ၁၈ မရပဲ ၃၅ မီလီမီတာ ယူလိုက်ရတယ်.။
ဒီပုံလည်း ရေပန်းဥယျာဉ်မှာပဲ ရိုက်လာတာ.။ Night shot ကိုတော့ သေချာမရိုက်တတ်သေးတော့ စမ်းရိုက်ရင်းနဲ့ လက်လွန်သွားတော့ Exposure time က ၃၀ စက္ကန့်အထိသွားတော့အလင်းတွေ အများကြီးဝင်သွားတယ်.။ နောက်မှ ထပ်ရိုက်ဦးမယ်.။
လောလောဆယ်တော့ ကျန်းမာရေးက နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးဖြစ်နေတယ်.။ ဒီနေ့တော့ သက်သာပါပြီ.။ ဘလော့ကို မဝင်ဖြစ်တာလည်းကြာပြီ.။ ရောက်တတ်ရာရာ ပို့စ်လေးတွေလည်း မရေးတာကြာပြီမို့ပါ.။ နောက်ဆိုရင် ဓာတ်ပုံဆိုပြီး Category တစ်ခု သက်သက်ခွဲဦးမယ်လို့ ကြံထားတယ်.။ ဒီလကတော့ အေးဆေးပါ.။ ကျွန်တော် သင်တန်းမပါသေးဘူး..။ အစ်မမဒမ်ကိုး နေပြည်တော်လာရင် တွေ့ဖို့ရှိသေးတယ်.။ လောလောဆယ်တော့ ဒီဇင်ဘာက ချိုမြိန်နေတုန်းပဲ..။
လောလောဆယ် ရုံးဆင်းပြီမို့ ထမင်းစားဖို့ လိမ့်ဦးမယ်ဗျာ.။ တော်သေးပြီ..။
Posted by မိုးသက် at 9:19 PM4comments Read more
Labels: Photography, ရောက်တတ်ရာရာ
ဝရန်တာလို လဟာပြင်မဟုတ်တဲ့ အခန်းလေးထဲမှာဟော်လိုဂစ်တာလေးတစ်လုံးကို တိတ်တိတ်ကလေး တီးနေချင်တယ်..။ ဘယ်သူမှ ကြားစရာမလိုဘူး..။ ကိုယ်ကိုယ့်ကိုယ် ရည်ညွှန်းတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့..။ တိုးတိုးလေးပေမယ့် အသံတွေ တိမ်သွားတဲ့အထိ ရင်ဘတ်ထဲမှာ အော်ဆို ချင်တယ်.။ စိတ်ကြည်လင်နေတဲ့အခါ ဂစ်တာတီးလို့ သိပ်ကောင်းတယ်..။ စိတ်ရှုပ်နေရင် Tempo မထိန်းနိုင်ဘူး.။ Swim တွေ ဆူလွန်းတယ်.။ ကြိုးတွေခါလွန်းတယ်.။ Picking တွေ မငြိမ်ဘူး.။ ဂျပ်ဂျပ် သံတွေပါနေတတ်တယ်.။
ဂျူးရေးပြီး ကိုငှက်ဖတ်တဲ့ "မြရဲ့လ" ကို အလွတ်ရမတတ်နားထောင်ဖြစ်တယ်.။ တစ်ခါတစ်လေ အဲဒီထဲကအတိုင်း ကိုယ့်မှတ်ဥာဏ်တွေပျောက်သွားစေချင်တဲ့ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုနဲ့ လ ကို စိုက်ကြည့်ဖြစ်နေတယ်။ ထူးတော့ထူးမလာပါဘူး..။ ကိုယ်က ဂျူးဝတ္ထုတွေဖတ်တာရှားပါတယ်.။ ကိုငှက်အစွဲနဲ့ နားထောင်ရင်းကနေ ကြိုက်သွားခဲ့တာ..။ ရင်ကိုထိတဲ့ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ပေါ့..။
Propaganda, Persuasion & Deception ဆိုတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဒေါင်းလုပ်ချထားတယ်.။ အားရင် ဖတ်မယ်ဆိုပြီးခဲထား ပေမယ့် foreword ကိုတောင် အတော်ဖတ်ယူရတယ်.။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Terms တွေက မြန်မာလိုတောင် အတော်စဉ်းစားနေရတယ်.။ (ကိုယ်ညံ့တာလည်း တစ်ဝက်လောက် ပါမှာပေါ့)။ ကိုယ်ကတော့ ဝါဒဖြန့်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး.။ သဘောတရားတွေ သိထားချင်လို့ထက် မပိုပါဘူး.။
ဥပဒေကြမ်းတွေ ပြဌာန်းလိုက်ပြီလို့ ဖတ်ရတယ်.။ အစောကတည်းက ကိုယ်သဘောမကျခဲ့တဲ့ ဥပဒေတွေမို့ စိတ်ထဲတော့ကသိ ကအောက်ဖြစ်တယ်.။ လွတ်လပ်စွာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကွဲလွဲချင် ပါတယ်.။ ကိုယ့််အသိထဲတော့ ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်ဘာသာကို ဥပဒေထုတ်ပြီး ကာကွယ်ရတာမျိုးကို စိတ်ထဲသဘောမတွေ့ဘူး.။ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ဆိုတာ ပိုမိုရှင်သန်ကြီးထွားအောင်၊ ရင့်သန်အောင်၊ အမြစ်တွယ်အောင် လုပ်မှပဲ တည်တံ့မယ်လို့ ယူဆတယ်..။ ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေး ရှင်းလိုဟာမျိုးလေးတွေကို သိပ်သဘောကျလို့ တပ်မှာတောင် အခွေတွေ ဝေခဲ့သေးတယ်.။
ကျွန်တော့်ဘဝ ကျွန်တော့်အကြောင်း ရေးရင်းတန်းလန်း PC မှာသရဲခြောက်တဲ့ ကိစ္စ ရေးနေ တုန်း ရပ်နေတယ်.။ အရင် စကားပြောနဲ့ ရေးပြီးသားကို စကားပြေပြန်ပြောင်းရမှာမို့ ပျင်းနေတယ် နဲ့ တူပါရဲ့..။ လောလောဆယ် ပရင့်ဖက်ကို ကူးဖို့ ကြံနေတယ်..။ ကိုယ့်လက်က ကချော်ကချွတ်မို့ အရှက်ကွဲမှာလဲ စိုးပါရဲ့.။ ဒါပေမယ့် ဘယ်မှာပဲရေးရေး လောလောဆယ်တော့ ကိုယ့်လက်က စာရေးဖို့ကို တွန့်ဆုတ်နေတာပြဿနာဖြစ်နေတယ်.။ အပြင်မသွားဖြစ်တော့ စိတ်ကူးမပေါ်တာလဲ ပါမှာပေါ့.။ အပြင်ကို တစ်ယောက်တည်း သွားတဲ့အခါတွေ၊ တစ်ယောက်တည်းဆိုင်ကယ် အဝေးကြီးစီးတဲ့အခါ မျိုးတွေမှာ စိတ်ကူးပေါ်တတ်တယ်.။ ၂ ယောက် ၃ ယောက်ဆို စကားများရင်းနဲ့တင် အတွေးကထွက်မလာဘူးဖြစ်သွားတယ်.။ တစ်လ တစ်ပုဒ်လောက်တော့ ပုံမှန်လေးရေးပို့ကြည့်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားမိတယ်.။
ထူးအိမ်သင်ရဲ့ အဖေ သီချင်းကို နားထောင်ရတယ်.။ အမေသီချင်းတွေပဲ နားထောင်ဖြစ်ပြီး အဖေသီချင်းနားထောင်တဲ့အခါ မျက်ရည်ဝဲတဲ့အထိ ခံစားရတယ်.။ သီချင်းနဲ့ သရုပ်ဆောင်တာ သိပ်ပြီး လိုက်ဖက်လွန်းလို့ပါ.။ အဲဒီ MTV တစ်ခေါက်ကြည့်ဖူးတယ်.။ တကယ့်လူကြမ်းအဖွဲ့က သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကို တကယ်ရိုက်ထားတာလို့ ဆိုတယ်..။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာလည်း Issues ရှိပြီးသားမို့လားမသိဘူး.။ ရင်ထဲကို တကယ်ထိခတ်သွားတယ်.။
အမျိုးတွေ စိတ်ပူမှာစိုးလို့ မပြောပဲ အခုမှ ပြောတာ..။ ဒီဖက်ကို ပြောင်းလာတဲ့နေ့က တပ်မှာ အရေးကြီးတဲ့ စာရွက်ကျန်ခဲ့လို့ မိုင်(၄၀)လောက်ဝေးတဲ့နေရာကို နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ယူရတယ်.။ ကိုယ်က အလာကတည်းက ယူမယ် လို့ ပြောထားပါလျက်နဲ့ အရေးမကြီးလို့ MO ပဲ ယူသွားပါ ဆိုလို့ ယူသွားပြီး ပါမလာတော့ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ယူရတာပေါ့..။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရော သူ့ကိုပါ စိတ်တိုပြီး တောင်တွေကြားကဖောက်ထားတဲ့ ဖြတ်လမ်းကအပြန်မှာ OTT မရောက်ခင်မှာ ကုန်းဆင်းအကြီးကြီးကိုမှ အောက်ခြေမှာ Angle ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ ကွေ့ခပ်ကြီးကြီးရှိတယ်.။ အဲဒီကုန်းဆင်းမှာ အရှိန်လွန်ပြီး ကွေ့အတိုင်းမကွေ့နိုင်ပဲ ဆိုင်ကယ်က လမ်းဘေးက ကပ်တုံးပေါ်အထိ တက်သွားတယ်.။ ကံကောင်းချင်တော့ ဆိုင်ကယ်ကကပ်တုံးအလွန်မြောင်းထဲမှာညပ်ပြီး ရပ်သွားတယ်.။ လူကလည်း အဲဒီနားက မြက်ဖုတ်တွေထဲမှာ အထူဆုံးနဲ့ အရှည်ဆုံးမြက်အုံထဲကို ဇက် နဲ့ ကျတယ်.။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သွားပြီ လို့ တွက်ထားပေမယ့် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကျေးဇူးကြောင့် တံတောင်ဆစ်မယ် သေးသေးလေး ပွန်းသွားတာကလွဲရင် မြက်ရှရာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်.။ ကိုယ့်နောက်က ကုန်းဆင်းကြီးကို လိုက်ဆင်းလာတဲ့ ကျောက်ခွဲစက်ကားမောင်းတဲ့သူက ကားရပ်ပြီး ချက်ချင်းပြေးထူတယ်.။ သွေးပူနေတာရော၊ လန့်သွားတာရောကြောင့် သွေးရူးသွေးတမ်းနဲ့ ပြန်ထ တယ်ထင်နေတာ.။ ကိုယ်ဘာမှ မဖြစ်ဘူးဆိုတာ သူမယုံဘူး ဖြစ်နေတယ်.။ ဆိုင်ကယ်ကတော့ ဘယ်ဖက် ခြေနင်းတုံးကောက် သွားလို့ ကျွဲရှင်းအထိ မှေးစီးသွားပြီး ဟိုရောက်မှ ဝပ်ရှော့တစ်ခုဝင်ပြီး ပြန်ဖြောင့်ခဲ့ရတယ်.။ ကံသီလို့ဗျာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဂန့်တော့မလို့..။ Shock အကြီးကြီး၊ သင်ခန်းစာအကြီးကြီး တော့ရသွားတယ်.။ စိတ်တိုနေတဲ့အခါမျိုး.။ Emotion သိပ်များနေတဲ့အခါမျိုးမှာ ဆိုင်ကယ် မမောင်းသင့်ဘူး ဆိုတာပေါ့.။
Posted by မိုးသက် at 6:07 PM2comments Read more
ကျွန်တော့်ဘဝ ကျွန်တော့်အကြောင်း (၅)
ညနေ တန်းစီကို ညနေ ၆ နာရီတွင် တစ်ခါစီသည်။ ထမင်းကျွေးသည့်စားရိပ်သာက ကုန်းအောက်မှာရှိသည်။ ရိပ်သာမှာမစားလိုသူများ ဝယ်စားနိုင်ရန် ဆိုင်တန်းများလည်းရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းကို စားရိပ်သာတာဝန်ခံ မှာ ဗက သက်လွင်ဦးဖြစ်သည်။ တာဝန်ခံအပြင် ဗိုလ်ကြီးကတော်ကလည်း ရိပ်သာအတွက် ချက်ပြုတ်ပေးသည်ကို ထူးခြားစွာတွေ့ရသည်။ တစ်သက်လုံး တပ်ထဲမှာ ဆရာကြီးများချက်သည်ကိုသာ စားခဲ့ရသော ကျွန်တော်တို့အဖို့ အမျိုးသမီးချက်သည့်လက်ရာကို ထူးထူးခြားခြားစားရခြင်း ဖြစ်သည်။ စားရိပ်သာက ချက်ပြုတ်သည်များမှာ စားသောက်၍ ကောင်းမွန်အဆင်ပြေသည်။ ဗိုလ်လောင်းဘဝက စားခဲ့ရသကဲ့သို့ တစ်ခါတစ်ရံ မကျက်တစ်ကျက်ဖြစ် သည်များကို မကြုံခဲ့ရ။
ညဖက် Surprise check တန်းစီမှ လန့်ရတော့သည်.။ မိမိတို့ တန်းခွဲမှူးက အလုပ်သင်(တေဇ) မှ ဗိုလ်မှူးတစ်ဦး (ထိုဗိုလ်မှူးမှာ သင်တန်းဖွင့်ပြီး ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် ပြောင်းရွှေ့သွားသဖြင့် မမှတ်မိ) နောက်တစ်ယောက်က ဗက မင်းဇော်ထွန်း(စတသ-၃၇) ဖြစ်သည်.။ ဗကမင်းဇော်ထွန်းက လူမှန်ဖြစ်သည်.။ တပ်မတော် တွင် တွေ့ရခဲသော ဆုပေး၊ ဒဏ်ပေးစနစ်ကို အမှန်အကန်ကျင့်သုံးသည်။ အပြစ်ဖောက်သူကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုံးမသည်။ အပြစ်မဖောက်သူ၊ စိတ်ဓာတ်ရှိရှိနေထိုင်သူက ထိုသူအကျင့်အတိုင်း အားပေးချီးမြှောက်သည်။ ရှာမှရှားသော နောင်တော် တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ရောက်ရောက်ချင်းည Surprise check တွင် ကျွန်တော်တို့ အိပ်ဆောင်မှ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် နောက်ကျ တော့သည်။ ဗိုလ်ကြီးမင်းဇော်ထွန်း၏ လက်သံပြောင်မှုကို စတင်မြည်းစမ်းရတော့သည်။
“နောက်ကျတဲ့ ဗိုလ်ကြီး ထွက်ခဲ့ပါဦး…”
ဝူခုံးဟု အမည်ပြောင်ပေးထားသည့် ကျွန်တော်တို့ အပတ်စဉ်မှ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် Squad တွင်းမှ ထွက်သွားသည်။
“ဗိုလ်ကြီး ရာသီဥတုက အေးတယ်နော်…”
“ဒါဆို အင်္ကျီလေး ချွတ်ပြီး Craw လေးဆွဲလိုက်ပါဦး…”
ဆောင်းမကျွတ်သေးသော ရာသီဥတု ချမ်းချမ်းစီးစီးမှာ Craw ဆွဲရတော့သည်.။ သိပ်မကြာပါ.။ ခဏကြာတော့ ထခိုင်းပြီး သတိပေးစကားဆိုသည်။
“တန်းခွဲ(၁) ကဗိုလ်ကြီးတွေ အားလုံး နားထောင်ကြပါ..။ ကျွန်တော့်နာမည်က ဗိုလ်ကြီး မင်းဇော်ထွန်းပါ.။ စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ် (၃၇) က ကျောင်းဆင်းပါတယ်…။ ဗိုလ်ကြီးတို့ ညဖက် အဆောင်မှာ အားလပ်နေတဲ့အခါ..။ ကျွန်တော်ကတော့ အလုပ်မရှိလို့ ပျင်းလှပါပြီ.. တို့..။ ကျွန်တော့်အချိန်တွေ သိပ်ပိုနေတာ ဘယ်မှာ သွားထားရမှာလဲ တို့ အော်မနေပါနဲ့.. Extra တွေ ရေးရပါလ်ိမ့်မယ်…”
တပ်စုမှူးသင်တန်း ရှေ့အပတ်စဉ်များက ဒီထက်ကြမ်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်.။ သုိ့ရာတွင် ကျွန်တော်တို့ အပတ်စဉ် နှင့်မူ အလွန်ပင် ချစ်ကြည်လေးစားခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်.။ တန်းစီချိန်တွင် ၅ မိနစ်အတွင်းရောက်အောင် စီရသည်။ တန်းစီသည်ကို စိတ်တိုင်းကျတော့ စကားကို များများမပြော.။ လိုရင်းတိုရှင်းပြောပြီး ချက်ချင်း တန်းဖြုတ် သည်။ ဤသည်ကပင် သဘောကျစရာဖြစ်နေသည်.။ တန်းစီသည်၊ လူစုံကြောင်းသတင်းပို့သည်။ ပြောလိုသည်ကို အမြန်ဆုံး လိုရင်းပြောသည်။ အလွန်ဆုံးကြာ ၃ မိနစ်ထက်ပင်မကြာ။ ပြီးလျှင် တန်းဖြုတ်သည်.။ မိမိတို့ တန်းခွဲမှ တန်းဖြုတ်ပြီးပြီ.။ အခြားတန်းခွဲမှ တန်းစီနေတုန်း.။
ထို့အပြင် ဆုပေးဒဏ်ပေးစနစ်ကိုလည်း အမှန်အကန် ကျင့်သုံးသည်.။ ဥပမာဆိုကြပါစို့..။ လူမှုဝန်ထမ်း Fatigue လုပ်သည့်အခါ ကိုးလိုးကန့်လန့် ဖြစ်၍ ဧရိယာများကြားမှ အကွက်တစ်ကွက်ကျန်နေခဲ့ပြီ ဆိုပါစို့..။ သူက မိမိဖာသာ Volunteer လုပ်မည့် လူ ငါးယောက်ခန့် မိမိသဘောနှင့် ထွက်လာစေသည်.။ မိမိသဘောဖြင့် မြက်ပေါက် မည့် ၅ ယောက် ကို နောက်ရက်မနက် PT ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်သေးသည်.။ ထိုသို့ဖြစ်သည်.။ သို့ဖြစ်၍ သူခိုင်းသည့် အလုပ်မှန်သမျှ စေတနာပါပါလုပ်ကြသည်.။ Fatigue လုပ်ရာတွင်လည်း ဧရိယာများပတ်ကြည့်နေရင်း သူ့အိတ်ထဲက Premium gold ဆေးလိပ်ဘူးကို ထုတ်၍ ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူများကို ဝေတတ်သေးသည်…။ ရေခဲချောင်း၊ ရေခဲရေ ရောင်းသည့် ဈေးသည်များရောက်လာလျှင်လည်း ပုံးလုံးကျွတ်ဝယ်ယူ၍ အလုပ်လုပ်နေသူများကို တိုက်ကျွေး တတ်သေးသည်.။
အပြစ်ဖောက်သူများကို ရေရေလည်လည်သမ တတ်သည့် ဗိုလ်ကြီးမင်းဇော်ထွန်းက ကျွန်တော်တို့ အပတ်စဉ် ကို နားလည်သဘောပေါက်လာသည်.။ ခြေလျင်တပ်စုမှူးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၈၀) သည် သူနည်းပြသက်တမ်း တစ်လျှောက်တွင် ကိုင်တွယ်၍ အကောင်းဆုံးပါဟု ရုံးကိစ္စဆောင်ရွက်သည့် ဗိုလ်ကြီး ရန်နောင်မြင့်(ဗသက-၉၅) က ဝန်ခံသည်.။ ကျွန်တော်တို့ အပတ်စဉ်ကလည်း တကယ့် မိုကြွသူတွေအများသားဖြစ်သည်.။ ညဖက်တပ်ပြင် မထွက်ရ အမိန့်ရှိသည်.။ ရောက်စက ကင်းပုန်းတွေဘာတွေနှင့် စောင့်ဖမ်းကြသည်.။ တကယ်က တပ်ပြင်ထွက်ဖို့ နေနေသာသာ သင်တန်းထဲက မောင်းထုတ်လျှင်ပင် ထွက်မည့်သူ ရှိမည်မဟုတ်.။ ကျွန်တော်တို့ အပတ်စဉ်က အရာရှိများ၏ အကြီးဆုံးပြစ်ဒဏ်မှာ ညဖက် ဗိုက်ဆာလျှင် ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းဖက်က ဆိုင်တွေ ဆင်းဆင်းစားတတ်သည့် အပြစ်သာဖြစ်သည်.။ အခြားအပတ်စဉ်များနှင့် ယှဉ်လာလျှင် ထိုကိစ္စက အပြစ်ဟုပင် မဆိုသာ.။ ဘောလုံးပွဲရှိလျှင် ဆိုင်တန်းထဲမှာသွားကြည့်ကြသည်.။ ရံဖန်ရံခါ ဆိုင်တန်းထဲက ဂိမ်းဆိုင်မှာ ဂိမ်းနှိပ်ကြသည်.။ သင်တန်းပြီးဆုံး သည်အထိ ဘာဆိုဘာမှ ပြဿနာမတက်ခဲ့.။ တပ်ပြင်လည်းခိုးမထွက်၊ ပစ္စည်းလည်းမပျောက်၊ ရန်လည်းမဖြစ်၊ အရက်မူးပြီး ရမ်းသူလည်း မရှိ၊ နောက်ပိုင်း မိမိတို့ အပတ်စဉ်၏ နေပုံထိုင်ပုံအတိုင်း အုပ်ချုပ်မှုက ပြောင်းလဲပေးသည်.။ သင်တန်းကာလတွင် အတော်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းခဲ့သည်.။ တစ်ခါက စာမေးပွဲ ဖြေရာတွင် အမှတ်၂၀၀ ဖိုးမေးခွန်းကို အမှတ် (၂၀၀) အပြည့်ရသူများ မတ်တတ်ရပ်ပါ ဆိုသည်တွင် အတန်းတစ်ဝက်နီးပါး ထရပ်ကြပြီး.. ၁၈၉ မှတ်ရသော ငမိုး အဆင့် ဟိုး နောက်ဆုံးရောက်သွားသည်ကို သတိရမိသေးသည်.။
ဖေဖော်ဝါရီလမှ စသောသင်တန်းသည်. တကယ့် အပူချိန်မြင့်သောကာလ သို့ တစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်လာ သည်.။ ရှမ်းပြည်နယ် ဆိုသော်လည်း ရပ်စောက်ဝန်းကျင်သည် တကယ့် မြေပြန့်ဖြစ်သည်.။ ပူပြင်းခြောက်သွေ့မှုကြောင့် မကြာခဏ တောမီးလောင် လေ့ရှိသည်.။ သင်တန်းနား အနီးတစ်ဝိုက်တွင် တောမီးလောင်ပြီဆိုလျှင် မိမိတို့ တပ်စုမှူး သင်တန်းမှသင်တန်းသားများကို လာရောက်ခေါ်ယူကာ ငြှိမ်းသက်ရလေ့ရှိသည်.။ မီးကလည်းမကြာခဏ လောင်သည်။ မိမိတို့လည်းမကြာခဏ မီးသတ်ကြရသည်..။ အချို့က တပ်မတော်တိုက်ခိုက်ရေးကျောင်း(ဗထူး)ဟူသည့် အမည်ကိုပင် တပ်မတော်တိုက်ခိုက်ရေးနှင့် မီးသတ်သင်တန်း ကျောင်း ဟု လှောင်ပြောင်ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
မီးလောင်ပြီဟု ဆိုလျှင် အကုန်ပြေးလွှား၍ ငြှိမ်းသတ်ကြရသည်.။ မီးတားလမ်းများ ဖောက်၍ မီးကြိုရှို့ကာ မီးလောင်မှုကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရသည်..။ နောက်ထပ် အခက်အခဲ တစ်ခုက ရေရှားပါးသည့် ပြဿနာဖြစ်သည်.။ မိမိတို့ စစ်တက္ကသိုလ် ဖိုင်နယ်ရီးယားဘဝတွင် ကြွေပြားကပ် အုတ်ကန်ထဲကရေကို ရေပုံးဖြင့် အားရပါးရခပ်၍ ချိုးခဲ့ဖူးသည်.။ ဂျူနီယာအင်တိတ်များက ရေခွက်ဖြင့် ချိုးရသည်.။ ရေရှား၍ မဟုတ်.။ ပုံးဖြင့် ချိုးခြင်းသည် Final year ဘဝ၏ အရသာတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်.။ ဗထူးတွင်နွေအခါ ရေရှားသည်.။ ဗထူးစမ်းမှ ရေကို သင်တန်းအပေါ်က ရေစင်ကုန်းပေါ်သို့ တွန်းတင်ပြီးမှ ရေပြန်ပေးဝေခြင်းဖြစ်သည်.။ ဗထူးစမ်းရေနည်းသောအခါ ရေမတွန်းပေးနိုင်.။ ထိုအခါ မိမိတို့ သင်တန်းသားများ ချိုးရေအခက်ကြုံရတော့သည်.။ စစ်သားဆိုသည်ကလည်း တစ်ရက်လျှင် ရေ ၂ ခါ ချိုးမှ အဆင်ပြေသည့် အမျိုးဆိုတော့ ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်.။
“ငါတို့… ဝမ်းနိုင်းဒဘယ်ဇီးရိုးကနေ တူးဝမ်းဒဘယ်ဇီးရိုးထိ ဗထူးစမ်းကနေ ရေကို တွန်းပို့လိုက်ပြီး.. ဟိုးအပေါ်က ကန်ကြီးမှာ စတိုးလုပ်ပြီးမှ မင်းတို့ဆီ ပြန်ပို့တာ” ဟု အစချီ၍ သင်တန်းမှူး ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး သန့်ဇင် မကြာခဏပြောလေ့ရှိသည်.။ သင်တန်းမှူးအဘက ဘုရားတရားသမား.။ လမ်းလျှောက်လျှင်ပင် ပါးစပ်က ပရိတ်၊ ပဌာန်းကို တွတ်တွတ် ရွတ်နေလေ့ရှိသည်.။ ထိုစဉ်အခါက ကျောင်းအုပ်ကြီးက ဗိုလ်မှူးချုပ်ရဲအောင် (ယခုဗိုလ်ချုပ်ရဲအောင်) ဖြစ်သည်.။ ကျောင်းအုပ်ကြီးက အရာရှိငယ်များကို သားသမီးသဖွယ် ချစ်ခင်ကြင်နာသည်.။ ကလေးများလိုပင် သဘောထားသည်.။ တစ်ခါကလည်း မီးတားလမ်းအတွက် မီးရှို့ရင်း ကျောင်းအုပ်ကြီး အိမ်ကို မီးလောင်မလို ဖြစ်၍ အတင်းငြှိမ်းသတ်ရသေးသည်.။ ကျွန်တော်တို့ အပတ်စဉ်မှာ ထိုသူငယ်ချင်းမှာ ကျောင်းအုပ်ကြီးအိမ် မီးရှို့သည့်မောင် ဟု နာမည်ကြီးသွားသေးသည်.။
ပြဿနာလည်းမတက်၊ သင်တန်းမှူးနှင့် နည်းပြများကလည်း တကယ့်စစ်သား စီနီယာအရင့်အမာကြီးတွေ၊ အတွေ့အကြုံပြည့်ဝသူများဖြစ်ရာ တပ်စုမှူးသင်တန်းက အမှန်တကယ်ပင် ပျော်စရာကောင်းနေသည်.။ ပင်ပန်းသည် ဆိုသော်လည်း အတော်ပျော်ခဲ့ကြသည်ကို မှတ်မိသည်.။ ဗထူးမှ ညောင်ပင်သာလမ်းအတိုင်း အင်တော ကျောက်ဂူ ဒေသ အထိပေါက်သောလမ်းပေါ်တွင်ရှိသော ၄ မိုင်တိုင် မဆုတ်တမ်းခံစစ်ကုန်းကြီးပေါ်တွင် ခံစစ်သင်ခန်းစာများ လေ့ကျင့်ကြသည်.။ ဗထူးသည် တပ်မြို့ဖြစ်သော်လည်း မလှမ်းမကမ်းရွာများတွင် ရံဖန်ရံခါရန်သူနှင့် ထိတွေ့မှု ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ Outdoor သင်ခန်းစာများသည်ပင်ပန်းသော်လည်း ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသည်.။ သင်တန်းတွင် မိမိနှင့် အတွဲများသည်က. သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်ရထားသော သူငယ်ချင်း အောင်ပြည့်ဖြိုးငြိမ်းတို့ မွန်ပြည်နယ်သား တစ်စုနှင့် ဖြစ်သည်.။ မိမိတို့ အတူတူ ထိုင်လေ့ရှိသော ဆိုင်ကလည်း အတူတူ၊ အောက်ဒိုးထွက်လျှင်လည်း မြေခင်းစများဆက်၍ အတူတူအိပ်စက်ကြရသည်…။
ပထမဆုံးအကြိမ်ထွက်ရသော မြေပုံဖတ်သင်ခန်းစာတွင် မိမိကပညာပြဖို့ ကြံသည်.။ ဗိုလ်လောင်းဘဝက အနော်ရထာတပ်ရင်းတွင် မိမိဦးဆောင်သော နရထ(၁၁)မှ တပ်စိတ်နှင့် အမှတ်(၇) တပ်ခွဲမှ တပ်စိတ်က မြေပုံအမှတ် အသားများကို အမြန်ဆုံးနှင့် အမှားအယွင်းမရှိအောင်ရှာဖွေနိုင်ခဲ့သည်ကို သတိရမိသည်.။ မြေပုံ/ မြေပြင်ကွဲလွဲချက်များ ကိုအရင် စဉ်းစားသည်.။ ပြီးမှ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပြီးရှာဖွေသည်.။ ဒီတစ်ခါ တပ်စုမှူးသင်တန်းမှာတော့ အချက်တစ်ချက် မှားလေသည်.။ စစ်သင်္ချိုင်းမြေပုံကို အမည်မဖတ်ခဲ့ပဲ ရမ်းထည့်ရမှာ လွဲမှားပြီး ယင်ကောင် ဆယ်ကောင် ခန့် ရိုက်ရလေ သည်.။ ယင်ကောင်ရိုက်သည်ဆိုသည်မှာ အပြစ်ပေးနည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး လက်ထောက်မှောက်(ဒိုက်ထိုး) အနေအထားမှ လက်ကို အားဖြင့် လေပေါ်ကန်၍ ခုန်ပြီး လက်ခုပ် တီးရခြင်းဖြစ်သည်.။ (မြန်မာကြိုက်မင်းသား ဗန်ဒိန်းပါဝင်သော Kick boxer5ဇာတ်ကားထဲမှ မင်းသားဗန်ဒိန်းလေ့ကျင့်သည့်နည်းကို မှတ်မိကြမည်ထင်ပါသည်.။)
ဂစ်တာသမား ၂ ယောက် တစ်ခန်း အတူတူ နေရခြင်းဖြစ်ရာ . ဂစ်တာတီးလိုသောဆန္ဒက ဖျောက်၍ မရ.။ သို့နှင့် ဗထူး တပ်နယ်ဈေးသို့သွားကာ ကုလားကြီးဟု အမည်ပြောင်ခေါ်သော ကျွန်တော့်အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်း တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဖြိုးသီဟ၊ ကိုလေးတို့နှင့် အတူ ဂစ်တာ ၂ လက် ဝယ်ဖြစ်ခဲ့သည်.။ ကိုလေးက လိဒ် အတီးကောင်း သည် ဖြစ်ရာ. ဖြိုးသီဟနှင့်ကျွန်တော်က ရစ်သမ်တစ်လှည့်စီတီး ကိုလေးက လိဒ်တီးဖြင့် တန်းခွဲ ၁ မှ ဂစ်တာဝိုင်းလေးက အတော်ပင် မြိုင်ဆိုင်လှသည်.။ တီးသည့်သီချင်းက အစုံ၊ လေးဖြူ၊ မင်းမင်းလတ်၊ စိုင်းထီးဆိုင်မှအစ ချစ်အာရုံ၊ ပုပ္ပားနတ်တောင်တော် အထိ မြန်မာသံ၊ စတီရီယိုသီချင်း အစုံပါပေ.။ ကိုလေးလက်သံ မည်မျှ ကောင်းပါသနည်း ဆိုလျှင် အိပ်ဆောင်၌ မဆူရန်လာပြောသည့် ဗိုလ်ကြီး မင်းဇော်ထွန်းပင် ဆိုင်ကယ်ရပ်၍ နားထောင်ရသည် အထိဖြစ်သည်.။ ကျွန်တော်တို့ ဂစ်တာဝိုင်းလေး စတင်ပြီ ဆိုပါလျှင် အခြားတန်းခွဲများမှ ကော်ရစ်ဒါထွက်၍ နားထောင်ကြသူကပင် အများ အပြားရှိသည်.။ ကုလားကြီးကတော့ အရက်သမား.။ အရက်သမားဆိုသည့်စကားက နည်းနည်းနားဝင်ဆိုးမည်မှာ အမှန်ပင် သို့ရာတွင် သူက မူးရူးသောင်းကျန်းတတ်သည့် အရက်သမားမျိုးမဟုတ်.။ တိတ်တိတ်သောက်၊ ငြိမ်ငြိမ်နေ၍ ဇိမ်ယူ အာရုံခံသော သောက်သုံးသူ စစ်စစ်ဖြစ်၏..။ တန်းခွဲ(၃)နောက်ကျောမှ ဝက်သားတုတ်ထိုးဆိုင်မှ အန်တီကြီး ဆိုလျှင် အမြည်းဝယ်ရင်း အင်မတန် ရင်းနှီးနေလေပြီ..။
စုမှူးသင်တန်းမှာ ကျွန်တော် စာလည်း ပြန်ရေးဖြစ်သေးသည်.။ နှင်းခချယ်ရီလွမ်းပန်းချီ(၃) ဖြစ်သည်.။ ရေးနေရင်း အချို့က ဝေဖန်ကြသည်.။ နှင်းခ(၂) ကို ဖတ်ဖူးသူအချို့က “မင်းဟာက (၃) လည်းမဟုတ်ဘူး.။ (၂) Modified ကြီး” ဟု ဆိုသူက ဆိုကြသည်.။ ခင်မင်နေသည့် တနတ မှ အစ်ကိုများကတော့ သဘောကျကြသည်.။ ထိုစာအုပ်ကို နိဂုံးချုပ်လုဆဲဆဲတွင်ကျွန်တော့် အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း အောင်အောင်မှ ယူဖတ်ပြီး. “မင်းစာအုပ်က အကွဲဇာတ်မျိုး၊ ကွဲပစ်လိုက်.” ဟု ဆိုလာသည်.။ ကျွန်တော်က ဇာတ်ပေါင်းဖို့ ကြံထားကြောင်းဆိုမိရာ.. “ကွဲပေးရင်ကွဲပေး. မကွဲပေးရင် မင်းစာအုပ်ကို ဖြဲဆုတ်ပစ်မယ်..” ဟု ဆိုလာသည်.။ သူငယ်ချင်း၏ ဆန္ဒအပြင် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လိုသောဆန္ဒ အရ နှင်းခ(၃) မှ ဇာတ်ကောင် မိုးသက်နှင့် မီမီတို့ နှစ်ဦးကို သေကွဲကွဲပစ်လိုက်ရလေသည်…။ သုိ့သော် စာမျက်နှာ အခက်အခဲအရ နှင်းခ(၃) ဇာတ်သိမ်းပိုင်းက အလျင်စလို နိုင်နေသည်ကို သတိထားမိသည်.။ (နှင်းခ ၃ ကို တပ်ပြန်ရောက်သည့်အချိန်တွင် မိခင်ထံပါဆယ် ဖြင့် ပို့ရာ အကြောင်းကြား လာမယူ စာတမ်းအနီဖြင့် ပြန်ရောက်လာသည်.။ မိုးရေများစို၍ မင်များပျံ့ကာ အတော်ပြန်ဖတ်ယူ ရသည်.။)
ဗထူးမှာ မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်ခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်များစွာရှိခဲ့သည့်အထဲတွင် ကျွန်တော် သရဲအခြောက်ခံရသည့် အကြောင်းလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်.။ မိမိဦးနှောက်ဖြင့် လိုက်မမီသောနာမ်လောကနှင့်ပတ်သတ်၍ ဗထူးတွင် ရှိစဉ်အခါ နှစ်ကြိမ်တိတိကြုံခဲ့ရသည်.။ မိမိတို့ သင်တန်းရုံးမှာ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူများ ရုံးအလုပ်တွေကူလုပ်ပေးနေသည်မှာတော့ ကြာပြီ..။ တကယ့်တကယ် ဇာတ်လမ်းစသည်မှာတော့ သင်တန်းကျောင်းမှ တပ်ကြပ်ကြီး/စာရေးတစ်ဦး ကွယ်လွန်သွားသည်မှစခြင်းဖြစ်သည်.။
Posted by မိုးသက် at 10:40 AM3comments Read more
Labels: ကျွန်တော့်အကြောင်း, ရင်တွင်းဖြစ်တည်မှု..., အမှတ်တရ
ကျွန်တော့်ဘဝ ကျွန်တော့်အကြောင်း (၄)
နေပြည်တော်မြို့မဈေးမှထွက်ခွာလာသော ပအို့ဝ်ထိပ်တန်း မှန်လုံအမြန်ယာဉ်သည် ရာဇဌာနီ လမ်းမကြီးမှ တဆင့် ဘောဂသီရိကားကြီးဝင်းသို့ တစ်လိမ့်လိမ့်ပြေးနေသည်..။ အချိန်က ညနေ ၅ နာရီ ခွဲခန့်ရှိချေပြီ။ ကားပေါ်မှာ ပါလာသည်က ကျွန်တော်၊ ကျွန်တော်တို့ တပ်မှ ရဲအောင်နှင့် အခြား တပ်စုမှူးသင်တန်းတက်မည့်သူများ၊ တပ်ခွဲမှူးသင်တန်း၊ ရင်းမှူးသင်တန်းသို့ သွားမည့် အရာရှိများပါလာသည်..။ နေပြည်တော်တောင်ကြီး ခရီးစဉ်သွား သောယာဉ်ပေါ်တွင်ဖြစ်၍ အရပ်သားတစ်ဝက်၊ တပ်မတော်သား တစ်ဝက်လောက်ပါလာသည်…။ ကားစထွက်ကတည်း ကတည်းက အချင်းချင်း မိတ်ဆက်ကြရင်း စတသ (၃၇)၊ မှ စတသ(၅၂) အထိ အင်တိတ် အစုံဖြစ်နေ၍ အချင်းချင်း မိတ်ဆက်ကြရင်း၊ ကျောင်းတော်မှ အလွမ်းပြေဟာသများ ပြောကြရင်းပင် ဘောဂသီရိကားဝင်းသို့ ရောက်လာခဲ့ ကြသည်.။
တပ်မှထွက်မလာခင် ကျွန်တော့်ကို သေသေချာချာမှာလိုက်သော တပ်ရင်းမှူးစကားကြောင့် ပါလာသော MA-၁၃ သေနတ်နှင့် ကျည်ဆံများကို ကျောပိုးအိတ်တွင်းမှာ ကိုယ်နှင့်မကွာဆောင်ထား၍ ကျန်သည့်ပစ္စည်းများမှာ သံသေတ္တာတစ်လုံး၊ ခရီးဆောင်မြွေရေခွံအိတ် တစ်လုံးဖြစ်သည်..။ MA-၁၃ သေနတ်က ခပ်တိုတို ကျည်အိမ်အရှည်ဖြင့် နိုင်ငံခြားဇာတ်ကားများထဲမှ အူဇီနှင့် အနည်းငယ်ဆင်သည်.။ ဒင်ကိုဖြုတ်ထား၍လည်းရ၍ ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားရတာ အဆင်ပြေ၍ တော်သေးသည်.။ သို့ရာတွင်ပင် ပြောင်းက ထောင်နေ၍ ကျောပိုးအိတ်ကို လွယ်ရတာ ကိုးလိုးကန့်လန့် ဖြစ်နေသေးသည်။ သို့သော် ကိစ္စမရှိ အရေးကြီးတာက မိမိကိုယ်မှ မကွာဆောင်ထားဖို့…။
ခဏကြာတော့ ကားကို လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပြီး ဘောဂသီရိ ကားဝင်းမှ ဆက်ထွက်သည်။ စောစောက လမ်းမီးရောင်တွေ ထိန်ထိန်သာနေသော ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီး။ ကားပေါ်မှာ ပါလာသော တပ်မတော်သား များနှင့် အချင်းချင်းသာနားလည်သော စကားများဆို၍ စကားစက အမျှင်မပြတ်၊ ခါးသီးမှုများကိုရင်ဖွင့်၍ ရယ်မောစရာ အဖြစ်ပြောင်းလဲကြခြင်းသည်ပင် ချစ်ကြည်သော တပ်မတော်သားအချင်းချင်း၏ ရဲဘော်စိတ်တစ်ခုပင်လား မပြောတတ်။ ခဏကြာတော့ မှောင်ရိပ်သန်းလာသော ပတ်ဝန်းကျင်အရိပ်အယောင်ကြောင့် မျက်လုံးများမှေးစင်း၍ အိပ်မောကျသွားတော့သည်။
ကျွန်တော် ရုတ်တရတ်နိုးလာတော့ သာစည်ရောက်နေပြီ.။ ဟိုးဖက်ဆက်သွားလျှင် ရွာငံသည် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ သည်နေရာသည် မန္တလေးတိုင်း၏ နောက်ဆုံးပင်ဖြစ်သည်။ သာစည်မှာ ကားရပ်နား၍ ညစာ စားကြသည်။ ထုံးစံအတိုင်း ရှမ်းသွေးတစ်ဝက်ပါသူ ကျွန်တော်စားခဲ့သည်က ရှမ်းခေါက်ဆွဲပင်ဖြစ်သည်။ ကားပေါ်က ပြန်ထွက်တော့ စပျစ်သီးဝယ်ရန်ကြံသည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက မိခင်ဈေးသွားလျှင် ခြင်းတောင်းလိုက်ဆွဲရုံမှ လွဲ၍ မည်သည့်ပစ္စည်းက မည်သည့်အလေးချိန်တွင် မည်မျှခန့်ပါဝင်သည်ကို စိတ်မဝင်စားခဲ့သော ကျွန်တော် အခက်ကြုံရပြီ။ များနေမည်စိုးသည်ကြောင့် အစိတ်သားကို ငွေ(၄၀၀) ကျပ်ဖြင့်ဝယ်ယူလာခဲ့သည်။ ထည့်ပေးလိုက်တော့ နည်းနည်းနောနော အထုပ်ကြီးမဟုတ်။ ဝယ်ပြီးမှတော့ မတတ်နိုင်။ မိမိနှင့် အတူထိုင်သည့် သူငယ်ချင်းက စပျစ်သီး သိပ်မကြိုက်ဟုဆို၍ မိမိဖာသာ တစ်ကိုယ်တည်း စားရတော့သည်.။
ကားပြန်ထွက်တော့ စပျစ်သီးထုပ်ကို ကိုင်ကာ ကားပေါ်တက်၍ တစ်လမ်းလုံး စပျစ်သီးမြုံ့ရင်း လိုက်ပါလာခဲ့ သည်။ တကယ်စားတော့လည်း ခပ်ချဉ်ချဉ် စပျစ်သီးကို ကျွန်တော် ထင်သလောက်မစားနိုင်။ ကားပေါ်မှ မဆင်းခင်က တည်းက အမေတို့ အမျိုးတွေအသံဝဲဝဲလေးတွေကြားရသည်။ ပါးမို့မို့ရဲရဲလေးများ၊ ဘာစကားပြောပြော၊ “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်” “ရပါတယ်ရှင့်” ဟုထည့်ပြောတတ်သော ရှမ်းမလေးများကို မြင်လာရပြီဖြစ်သည်။ သြော် ရှမ်းပြည်နယ် ဆိုတာ ဒါပါလား၊ ရှမ်းမလေးတွေ ဆိုတာ ဒါမျိုးပါလား ဟု တွေးတောသဘောကျရသည်။ မိမိသည်လည်း ပြင်ဦးလွင်သား စစ်စစ်ဖြစ်လေရာ ရှမ်းမလေးများကို အစိမ်းသက်သက်မဟုတ်..။ ရှမ်းကြိုက်သည်က နွားချောဖြစ်ချင် ဖြစ်ပါစေ.။ ရှမ်းပြည်နယ်က ရှမ်းမလေးများက မိမိမျက်စိထဲ ပိုသိမ်မွေ့နေသည်။ ပိုယဉ်လွန်းနေသည်။ ပိုစွဲမက်ဖွယ် ကောင်းနေသည်။
သိပ်မမောင်းရတော့ဘူး ဆိုသည့်စကားကြောင့်မိမိ နောက်ထပ် ခရီးကို ထပ်မအိပ်ဖြစ်တော့..။ အလင်းရောင်ကလည်း ပျိုးလာပြီကိုး.။ ကလောမြို့မှ ကြိုဆိုပါ၏ ဆိုသည့် ဆိုင်းဘုတ်မှာ ခေါင်းထောင်မိသည်။ ဤနေရာ ဤ ဒေသမှာ စစ်ဦးစီးတက္ကသိုလ်ရှိသည်ဟု OTT မဝင်ခင်က ဖတ်မှတ်ဖူးခဲ့သည်.။ ဟိုဟိုသည်သည် လိုက်ရှာသော်လည်း အမှောင်ထုကြောင့် ရှာမတွေ့ခဲ့ပါ.။ ကလောမြို့က မိမိတို့ ပြင်ဦးလွင်နှင့်အပြိုင် အင်မတန်နေချင့်စဖွယ် အေးချမ်းသော တောင်စခန်းမြို့ဟု သိထားခဲ့သည်.။ ကားလမ်းညာဖက်က ချိုင့်ဝှမ်းတစ်ခုလုံး အိမ်လေးများက အပြည့်။ မသဲမကွဲမြင်ရသော အလင်းရောင်မှာပင် အိပ်ရာနိုးစ ကလောမြို့လေးက လှလွန်းနေသည်ပဲ။
မအိပ်တော့ဘူး ဟု ကြံရွယ်ထားသော်လည်း မည်သို့မည်ပုံပြန်အိပ်ပျော်သွားသည်မသိ.။ သူငယ်ချင်းများက နှိုးမှ နိုးတော့သည်.။ မိမိ ရောက်တော့ ရပ်စောက်ဖက် ခွဲသည့် ရွှေညောင်လမ်းခွဲရောက်နေပြီ..။ မိမိတို့ ကားတစ်ဆင့် ပြန်ပြောင်းရ ပြန်သည်.။ မှန်လုံကားပေါ်မှ ပစ္စည်းများကို ချ၊ မိမိတို့ အုပ်စုလိုက် စီးလုံးငှားထားသည့် ဟိုင်းလပ်ကားပေါ်တင်ကြသည်။ အချင်းချင်း ပစ္စည်းမေ့ကျန်မည်စိုးသဖြင့် သတိပေးကြရသေးသည်။ ရပ်စောက်သွားသည့်လမ်းကတော့ တောင်တက်တောင်ဆင်းလမ်းနည်းပါးသည်.။ တကယ်တော့ ရပ်စောက်သည် တောင်ပေါ်က မြေပြန့်မြို့ကလေးဆန်ဆန်ဖြစ်နေသည်။ လမ်းမှာ ခေတ္တနားသည်.။ ဝက်သားနှင့် ရှမ်းခေါက်ဆွဲ စားရန်ကြံမိသော်လည်း တို့ဟူးနွေးနှင့် တို့ဟူးကြော်ကိုသာ နှစ်ခြိုက်စွာစားခဲ့မိပါသည်.။
ရပ်စောက်ကိုရောက်တော့ မိုးစင်စင်လင်းနေပြီ.။ မိခင်ကပါ လိုက်ပို့သော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏ မိခင်နှင့် တွေ့သည်။ မိမိတို့ သင်တန်းသို့ သွားရောက်သတင်းပို့ပြီး လိုအပ်သည့် အုပ်ချုပ်မှု ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် Outpass ပြန်လွှတ်ပေးကြောင်းသတင်းပေးသည်။ ထို့ကြောင့် အချိန်မဆိုင်းပဲ တပ်မတော် တိုက်ခိုက်ရေးကျောင်း(ဗထူး) ဆိုသည့် ဆိုင်းဘုတ်ကြီးအတွင်း သို့ ကားငှား၍ ထပ်မံချီတက်ခဲ့ကြတော့သည်။
စစ်ချီဝတ်စုံဖြင့် ရဲစိတ်ရဲမာန်တက်ကြွနေသော စစ်သည်တစ်ဦးပုံစံ ရုပ်တုဖြင့် တန်းပေါင်းစီကွင်းကြီး၏ အပေါ်ဖက် တွင်သတင်းပို့ကြရသည် မိမိက တန်းခွဲ(၁) ရှေ့ခြမ်း လှေကားဘေးက ကပ်လျက်အခန်းဖြစ်သည်။ အခန်းရလျှင် ရခြင်း အထုပ်အပိုးများထားကာ အိပ်ရာခင်းကျင်း၍ မေးစမ်းကြည့်တော့ သတင်းပို့ပြီးသူ အရာရှိများ တပ်ပြင်ပြန်လည်ထွက်ခွင့် မရှိကြောင်းသိရသည်။ ထိုအခါမှ ရပ်စောက်မြို့ထဲတွင် တွေ့ခဲ့သော သူငယ်ချင်း၏ မိခင်မှ မိမိတို့ သတင်းမပို့ပဲ အပျော်လွန်၍ အုပ်ချုပ်မှု ဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပွားမည်စိုးသောကြောင့် အမြန်သတင်းပို့စေခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရတော့သည်။
ခဏကြာတော့ မိမိအခန်းဖော်ရောက်လာသည်။ မိမိနေရမည့်အခန်းမှာ ၂ ယောက်ခန်းဖြစ်၍ မိမိနှင့် အတူ နေရသူမှာ တနတအမှတ်စဉ်(၁၂) မှ ကိုပြည့်ဖြိုးပိုင်(နောင်အခါတွင် သူ၏ကျောင်းသားနံပတ်(၄) ကို အစွဲပြု၍ ကိုလေး ဟုသာခေါ်ကြသည်) ဖြစ်နေသည်။ ကိုလေးနှင့် ကျွန်တော်မှာ တောင်ညိုတွင် YO တက်ခဲ့စဉ်က ဂစ်တာတီးဖော်တီးဖက်၊ ဖြစ်ဖူးပြီး တောင်ညိုမှာကတည်းက တပ်စုမှူးသင်တန်းတွင် တစ်ဆောင်တည်းကျလျှင် ကောင်းလိမ့်မည်ဟု ဆိုခဲ့ဖူးကြသည်။ ယခုအခါတွင် ကံအားလျော်စွာပင် တစ်ခန်းတည်း လာကျနေသည်။ အကြောင်းသိချင်း၊ ဝါသနာတူချင်း ဖြစ်လေရာ အဆင်ပြေသွားသည်။ (ကိုလေးသည် ကျွန်တော့်ကို Lead guitar တီးခတ်နည်း သင်ပေးခဲ့သည့် သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်။)
ထို့နောက် မိမိတို့ ပါလာသော လက်နက်ခဲယမ်းများကို ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း ဗဟိုကင်းတွင် သွားရောက် အပ်နှံကြရသည်။ အပြန်တွင် စစ်ဝတ်ပစ္စည်းဈေးတန်းကြီးကို တွေ့ရသည်။ မိမိမှာ စစ်ဝတ်ပစ္စည်းအစုံအလင် ပါလာသောကြောင့် အခက်အခဲမရှိ၊ ဘာတစ်ခုမှ မပါလာသူပင် ထိုဈေးတန်းမှာ စောင်၊ ခေါင်းအုံးမှ အစ အီကွစ်မင့်၊ ရေဘူး၊ ရေပုံအထိ အစုံအလင် ရသည်။ အသစ်မဟုတ်၊ တစ်ပတ်ရစ်များဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူပြီးသုံးစွဲနိုင်သည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးလျှင် ထိုဈေးသည်များ ထံပင် သင့်တင့်သောဈေးနှုန်းဖြင့် ပြန်လည်ရောင်းချခဲ့နိုင်သည်။ ရောင်းသူ၊ ဝယ်သူ နှစ်ဖက်စလုံး သဘောကျသည့် Win-Win စနစ်ပင်ဖြစ်သည်။ မိမိလည်း ပေါက်တူးတစ်လက်နှင့် ရေပုံးတစ်ပုံး ဝယ်ယူလာခဲ့တော့သည်။ သို့ရာတွင် ညနေတန်းစီချိန်မှစ၍ သင်တန်းကျောင်း၏ အစဉ်အလာများကို စတင်ထိတွေ့ မိတ်ဆက် ရပါတော့သည်။
Posted by မိုးသက် at 5:58 AM3comments Read more
Labels: ၀တ္ထုတို, ကျွန်တော့်အကြောင်း, အမှတ်တရ
ဟိုအတိတ်ကို မမျိုသိပ်ဘဲ ဆိုရလျှင်...
ချစ်လှစွာသော အစ်မကန်ဒီရဲ့ တဂ်ပို့စ်လေးပါ..။ အစ်မကလည်း ကျွန်တော် ဗိုက်ဗာမှာ တစ်ဂျီဂျီ လုပ်နေတာ အမြင်ကတ်လို့နဲ့ တူပါတယ်.။ အချိန်ကိုက်ကို တဂ်လိုက်ပါတယ်.။ အစကတော့ ငြင်းဦးမလို့ ပါပဲ..။ ဟိုအခန်းဆက်ကလည်း တို့လို့ တန်းလန်းကိုး..။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် မရေးတာကြာတဲ့ ဒီကြားထဲ ဟိုလိုဒီလို ဆောင်းပါးမကျ ဘာမကျ ပြောတာလေးတွေ မရေးဖြစ်တာကြာလို့ပါ..။ Labels တွေထဲမယ် ဆိုရင် ရောက်တတ်ရာရာပေါ့နော်.။ တကယ်တော့ ဒီအကြောင်းလေးကို ရေးမယ်လို့ စဉ်းစားမိတာက Blog Day ကတည်းကပါ.။ ဒါပေမယ့် အခုမှ ပဲ ရေးဖြစ်ပါတော့တယ်..။
အဲ.. ဒီအကြောင်းဆိုမှ .. ကျွန်တော်ရေးမှာ ဘာအကြောင်းပါလိမ့်..။ သြော်.. မှတ်မိပြီ..။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မော်စကိုရောက်ခါစ ဘလော့စရေးခါစ အကြောင်းလေးတွေပေါ့.။ ကျွန်တော် မော်စကိုစရောက်တော့ ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ ၃ ရက်နေ့ပေါ့နော်..။ အစကတော့ ကိုယ်က စာရေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ မရှိဘူး.။ ပထမဆုံး ဖတ်မိတာက အစ်မမဒမ်ကိုးနဲ့ ကိုရင်ရေးတဲ့ မဒမ်ကိုး ဘလော့လေးကိုပါ.။ အဲဒီထဲက မဒမ်ဖတ်ဖို့၊ ကိုရင်ဖတ်ဖို့ ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကျီစယ်ထားတာလေးတွေ အင်မတန် သဘောကျခဲ့တာ.။ ကိုယ်စာရေးမယ်ကြံရင် သူတို့ အရေးအသားတွေကြည့်တဲ့အခါ စိတ်အားငယ်ရတယ်.။ အစ်မတို့ စာရေးတာ အရမ်းကောင်းတာကိုး..။ (အင်း .. ခုတော့ သူတို့လည်း သိပ်ပြီး မကျီစယ်ကြတာကြာပြီ..) နောက် မကွန် ရေးတဲ့ ခရီးသွားမှတ်တမ်းတွေ ဖတ်မိတယ်.။ ကျွန်တော် စာစရေးတော့ မမေသိမ့်သိမ့်ကျော်ရဲ့ MOBA ဆိုတဲ့ Ning ဆိုက်ပေါ့.။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော့်စာတွေက Top Blogs တွေထဲမှာ အမြဲပါတော့ ချော့ကလတ်ကျူးပစ်လေးနဲ့ အစ်မ ဂျက် တို့က ဘလော့တစ်ခု လုပ်ပြီး ရေးဖို့ အကြံပေးတယ်.။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော် ဘလော့ စရေးနေပါပြီ.။ ဒါပေမယ့် နည်းပညာ ဘလော့ပေါ့လေ.။
မေမြို့မိုးလို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီဘလော့လေးကို ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့မှာစ ရေးဖြစ်တယ်. ။တန်းပလိတ်တွေလည်း အမျိုးမျိုးပြောင်း၊ ဘလော့လင့်ခ်တွေလည်း အမျိုးမျိုးပြောင်းရင်း ဖြူဖြူ စင်စင်နဲ့ ဣနြေ္ဒရရလေး လှတဲ့ ဒီတန်းပလိတ်လေးမှာ အထိုင်ကျသွားတော့တယ်..။ နာမည်ကိုလည်း စာအုပ်ထုတ်ခါနီး ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ Privacy နဲ့ ငြိတာကြောင့် မိုးသက်ဦးလွင်လို့ ပြောင်းလိုက်တယ်.။
ဘလော့စရေးခါစက ရယ်ရတယ်.။ ကျွန်တော် ဘလော့ပတ်ရင် ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့သူတွေဆိုရင် မိန်းကလေး ဆို ညီမလေးလို့ပဲ ခေါ်တယ်.။ ကျွန်တော် ညီမလေးလို့ ခေါ်တဲ့ အစ်မမြတ်ကြည်တို့၊ အစ်မချိုချဉ်တို့၊ ဆိုရင် ကျွန်တော့်ကို အစ်ကို၊ အစ်ကိုနဲ့ :D .။ နောက်မှ မွေးနေ့တွေ သိလာမှ လိုက်ရှင်းပြရတော့ ဆူခံရရော..။
ဘာလိုလိုနဲ့ ကျွန်တော် ပြန်ဖို့ရက်ကလည်း ၁၄ ရက်ပဲ လိုပါတော့တယ်..။ ကျွန်တော်လေ. ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီမောင်နှမ အသိုင်းအဝိုင်းထဲက ထွက်မသွားချင်ဘူး.။ အားလုံးနဲ့ အတူတူ ဆုံချင်နေမိတယ်.။ ကိုယ်က မောင်ငယ်လေး တစ်ယောက်လို အစ်မတွေ အစ်ကိုတွေကို ဆိုးချင်၊ ရစ်ချင်တဲ့ စိတ်လေးဖြစ်နေမိတယ် ထင်တယ်.။ တကယ်ပါ..။ (ဒီစာရေးတဲ့အချိန် ကျွန်တော် ဝမ်းနည်းသလိုလို ဖြစ်နေတယ်) .။ ကျွန်တော် အစ်မချိုချဉ်၊ အစ်မ မဒမ်ကိုး၊ အစ်မကျူတီ တို့ ဆူတာတွေ ခံချင်သေးတယ်.။ သူတို့ကိုလည်း စနောက် နေချင်သေးတယ်.။
ဒါပေမယ့် စစ်သားဘဝကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာ..။ နေရာနဲ့ အချိန် ကန့်သတ်လို့မရဘူးလေ.။ သွားဆိုတဲ့နေရာကို သွားခိုင်းတဲ့အချိန်မှာ သွားရမယ် မဟုတ်လား..။ ဘဝ အစစ်အမှန်ထဲကို ပြန်သွားရမယ် လို့ ကျွန်တော် မဆိုချင်ဘူး.။ ကျွန်တော်တို့အတူတူ စနောက် ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကို ဘဝ အတု လို့ မပြောရက်လို့၊ ပြောမထွက်လို့ပါ..။ ဒါဟာ တဒင်္ဂလိုပဲ.။ ဒါပေမယ့် အမြဲပဲ သတိရနေမိမှာပါ..။ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်သွားတဲ့ ကိုမောင်မောင်(မြစ်ဆုံ) စာမရေးနိုင်တော့တာကို သတိထားမိတယ်.။ ကျွန်တော်လည်း မသေချာဘူး.။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အားတဲ့အခါတိုင်း အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေကို ဆက်သွယ်ဦးမှာပါ.။
ဒီနိုင်ငံမှာလည်း အမှတ်တရတွေ အများကြီးပါ..။ ရောက်ခါစက သွားခဲ့တဲ့ နေရာတွေ။ ဘာသာစကား နားမလည်ခင်က အမှားမှား အယွင်းယွင်းအဖြစ်အပျက်တွေ၊ စိမ်းကားအေးစက်တဲ့ လူမျိုးတွေထဲက ကြုံတောင့်ကြုံခဲ နွေးထွေးတဲ့ နှလုံးသားရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ..။ တစ်ခါတစ်ခါ စိတ်တိုရ၊ တစ်ခါတစ်ခါ သဘောကျရ တဲ့ ဥရောပ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ၊ အေးစက်တဲ့ နှင်းပွင့်တွေနဲ့ အေးစက်တဲ့ မျက်နှာတွေ ဒါတွေ အကုန်ကို တစ်သက်စာ ထားခဲ့ရတော့မယ်လေ..။
ဒီမောင်နှမတွေ အားလုံးအတွက် ကျွန်တော်ဟာ ဘဝရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရဲ့ အမှတ်အသား ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.။ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ ဒီမောင်နှမတွေက ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထက် ပိုပါတယ်.။ ကျွန်တော်ရဲ့ အခြားဖက်က ကျွန်တော်တစ်ယောက်ရဲ့ မိသားစုတွေပါ..။ ကျွန်တော် ဒီလိုပဲ အမြဲတွေးထားမိတယ်.။
ဘယ်တော့မှ မမေ့တဲ့ အရာလေးတွေရှိတယ်...။
- အစ်မမဒမ်ကိုး ဓားနဲ့ သိုင်းချတဲ့ ပုံကို ခုထိ မမေ့ဘူး..။
- မေတ္တာဖြင့် အန်တီတင့် ဆိုတဲ့ ကွန်မန့်လေးကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး...။
- No myanmar font လို့ Custom message တင်ထားတဲ့ အစ်မကွန်ရဲ့ Google Talk လေးကို မမေ့ဘူး.။
- ကျောက်မီးသွေးရထားကိုစီးလို့ ကျွန်တော်သွားတော့မယ် မခင်စောအေး ဆိုတဲ့ ကိုရင့်အကောင့်ကို မမေ့ဘူး.။
- ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ Virtual Character အဖြစ် လူတွေ စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတဲ့ မခင်သီတာကို မမေ့ဘူး.။
- ၂-၅-၁၉၈၈ က မကန်ဒီမွေးနေ့ ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး.။
- အမွှေးဆုံး စံပယ်ဆိုတဲ့ မဂျက်မွေးနေ့ကဗျာလေးကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး..။
- ကော်ဖီခါးခါးကြိုက်ပြီး စတိုင်အရမ်းမိုက်တဲ့ မမိုးငွေ့ရဲ့ အိန်ဂျယ်ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး..။
- ကွန်မန့်ရေးသူတွေနာမည်ကို တေးထပ်ရေးပြီး Reply တဲ့ တုံးဖလားရွာသူကြီးမင်းကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး..။
- ကိုမောင်တစ်လုံး၊ ကိုမောင်နှစ်လုံးနဲ့ လက်ဝဲ၊ နွေလ ညီအစ်ကိုတွေကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး.။
ခဏလောက် ပျောက်သွားတဲ့အခါ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ဘယ်သူမှ မမေ့ကြဘူးလို့ ယုံကြည်နေမိတယ်.။ ကျွန်တော် ဘယ်နေရာရောက်နေနေ အားလုံး သတိမထားမိတဲ့အချိန်..တစ်ချိန်ချိန်မှာပေါ့..အားလုံးဆီကို “ဘွား”ကနဲ ပြန်ပေါ်လာမယ် ဆိုတာကြိုပြောဖို့ လိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်..။
Posted by မိုးသက် at 7:11 PM 8 comments Read more
Labels: အမှတ်တရ, ရောက်တတ်ရာရာ
အဲဒီနေ့က သောကြာနေ့ဖြစ်သည်.။ ဒီစာကိုရေးတဲ့အချိန် ထိုစဉ်ကရေးသော ဒိုင်ယာရီစာအုပ်က မြန်မာ နိုင်ငံက အိမ်မှာကျန်နေခဲ့သည်.။ သို့အတွက် ဘယ်ရက်လဲ ဆိုတာတော့ အတိအကျမမှတ်မိ..။ ထုံးစံအတိုင်း ညနေ မြက်ရှင်း Fatigue အပြီးမှာ တန်းဖြုတ်သည်..။ စားရိပ်သာမှာ သွားစားသူစားကြသည်..။ အောက်က ဈေးတန်းမှာ ယမကာမှီဝဲရင်း စားသူက စားကြသည်..။ မိမိက စားရိပ်သာမှာ စားပြီးမှ အောက်ဈေးတန်းမှာ ဖုန်း ဆက်ရန် ဆင်းလာခဲ့သည်…။
ထိုစဉ်က တောင်ညိုကသင်တန်းကျောင်းမှာ သင်တန်းသားများအတွက် လိုင်းဖုန်းချိတ်မထား၊ ယခုကဲ့ သို့ လက်ကိုင်ဖုန်းများ ပေါပေါလောလော ရှိသော ခေတ်အခါမျိုး မဟုတ်သဖြင့် သင်တန်းက ကဒ်ဖုန်း စီစဉ်ပေးထားသည်.။ Prepaid ကဒ်မျိုးဖြစ်သည်.။ ဖုန်းဆက်လိုလျှင် ဖုန်းကဒ်မှ ကုဒ်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး ဆက်ရန် ဖြစ်သည်.။ တစ်နာရီကဒ်၊ နှစ်နာရီကဒ် စသည်ဖြင့် ရှိသည်..။
ထိုနေ့က ဖုန်းဆက်ပြီး ညနေ Surprise check လူစစ်တန်းစီချိန်တွင် သင်တန်းကျောင်း တန်းစီရာနေရာ သို့ ပြန်တက်လာခဲ့သည်.။ တန်းစီချိန်တွင် တန်းခွဲ(၂)မှ အနော်ရထာ(၁၀) မှ ကျောင်းဆင်းသောသူငယ်ချင်း ရဲကျော် (အမည်လွှဲ) မှ အနည်းငယ် မူးယစ်နေသည်ကို သတိထားမိသည်..။ စောစောကတည်းက မိမိနှင့် အစေးမကပ်သူ ဖြစ်၍သော်လည်းကောင်း၊ မိမိမှလည်း စည်းကမ်းဖောက်သူကို ကိုယ်တိုင်လည်း မနှစ်မျို့သည်ကြောင့်သော် လည်းကောင်း စိတ်ထဲ အနည်းငယ် အချဉ်ပေါက်နေမိသည်..။ လူစစ်နေရင်း သူက မိမိဖက်သို့ အကြည့်နှင့် ဆုံ လေသော် မိမိမှ မကြည်ဟန် တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်သည်ကို သတိရသည်..။
တန်းဖြုတ်ချိန်တွင် ကျွန်တော် ပေါ်တီကိုအောက်မှ အထွက် အဆိုပါသူငယ်ချင်းမှ နောက်က ဆွယ်တာ အင်္ကျီကို ဆွဲထားသည်…။ ကျွန်တော်မှ ဆွဲထားသောလက်ကို ပုတ်ချလိုက်ပြီး…
“ မင်းမူးနေရင်. အေးအေး ဆေးဆေးနေ ရဲကျော်”
ဟု တစ်ခွန်းပြောပြီး ရှောင်ထွက်လာခဲ့သည်..။ နောက်မှ ဆဲသံ တစ်ချက်ကြားလိုက်၍ စိတ်က ထောင်းကနဲ ဖြစ်သွားသော်လည်း နောက်ပြန်မလှည့်ကြည့်ဖြစ်..။
တန်းဖြုတ်ပြီးတော့ အိပ်ဆောင်ဘေးက သက်သာဆိုင်မှာ ကော်ဖီဝင်သောက်ရင်း ခဏထိုင်သည်…။ လူတွေ အင်မတန်စည်နေသည့်ကြားမှ ရဲကျော်ကိုရှာသည်..။
ပွင့်လင်းစွာပြောရပါလျှင်မူ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ကြိုတင်ကြံစည်မှု တစ်ခုကို ပြုလိုက်မိသည်ဟု ဝန်ခံရပါ လိမ့်မည်.။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ရန်ဖြစ်ခြင်းကို တားမြစ်ထားခြင်း၊ မည်သူမှားမှား ရန်ဖြစ်သည်ကို လက်မခံသော မိဘ နှစ်ပါးလက်ဝယ်တွင်ကြီးပြင်းလာသော ကျွန်တော်သည် ရန်ဖြစ်ရာတွင် လက်သွက်လိမ့်မည်မဟုတ်၊ ခံရမည် ဆိုသည်ကို သိသည်..။ ထို့ကြောင့်ပင်လားမသိ.. ကျွန်တော် ထောင်ချောက်တစ်ခု ဆင်ခဲ့မိသည်..။
သက်သာဆိုင် အရှေ့မှာ ခုံအပုတွေခင်းထားသည်.။ ကျွန်တော်က ရှေ့ခြမ်းဆိုင်ထောင့်မှာ ခုံအပုဖြင့်ထိုင်နေသည်..။ ရဲကျော်နှင့် သူ့သူငယ်ချင်း ခပ်ဟော့ဟော့ တစ်ယောက်က ခုံအမြင့်ပေါ်မှာ ..။ သူကတော့ ကျွန်တော် ချောင်းနေခဲ့သည်ကို သိလိမ့်မည်မဟုတ်..။ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ကို မြင်သည်.။
ကော်ဖီကိုလက်စသတ်ပြီး ကျွန်တော်နှင့် အတူတူ ထိုင်နေသော ဖြိုးပိုင်ကို၊ ပြည့်ဖြိုးမောင်တို့ကို ခဏစောင့် ရန်ပြောသည်..။ လက်ပတ်နာရီကို ချွတ်ပြီးပြည့်ဖြိုးမောင်ကို ပေးလိုက်သည်.။ ကျွန်တော် ဘာလုပ်မည်ကို မသိသော ပြည့်ဖြိုးမောင်က နားမလည်စွာ ပြန်ကြည့်သည်.။ ကျွန်တော် ထရပ်လိုက်ပြီး ရဲကျော်တို့ ထိုင်နေသော ဝိုင်းသို့သွားသည်.။ ရဲကျော်နှင့် စကားပြောနေသည်က ကျွန်တော်တို့ တပ်က သူငယ်ချင်း ရဲလွင်မျိုး..။
“ ပါကြီးဟေ့ကောင်. ပိုက်ဆံပါရင် ဆေးလိပ်လေးဘာလေး ဝယ်တိုက်ပါဦး.. ငါ့မှာ ပိုက်ဆံမရှိတော့ဘူး”
အမှန်တော့ ကျွန်တော့်မှာ ပိုက်ဆံပါသည်..။ အထက်ပါစကားကို ကျွန်တော် မြင်ပြင်းကတ်စရာကောင်း လောက်အောင် အသံတစ်မျိုးဖြင့် လုပ်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်..။
“ မင်းသွားဝယ်လိုက်လေ ငါစောင့်နေမယ်..”
သူနှင့် စကားပြောနေသော ရဲကျော်က ရီဝေဝေအကြည့်ဖြင့်ကြည့်ပြီး…
“ ဟေ့ကောင်… ရော့ ငါ့အတွက် ဝယ်လာခဲ့ကြားလား.. သူတောင်းစား.. ”
“မင်း ဘယ်လို ပြောလိုက်တယ်. ဟေ့ကောင်…”
ရဲကျော်က ကျွန်တော်ဆင်သည့် ခွင့်အတွင်းသို့ တည့်တည့်ပင် ဝင်လာခဲ့လေပြီ...။
“မင်းကို ငါဆေးလိပ်သွားဝယ်ခိုင်းနေတာ ကြားလား.. ဟေ့ကောင်…”
ကျွန်တော် ပုဆိုးကို ခပ်တိုတို ပြင်ဝတ်လိုက်သည်..။
ရဲလွင်မျိုးက အခြေအနေကို သတိပြုမိပုံမရသေး..။ ကျွန်တော်က သူ့ကို တွန်းဖယ်လိုက်ပြီး ခုံပေါ်မှာထိုင်နေသော ရဲကျော်ကို အားကုန် ဆောင့်ကန်ချလိုက်သည်..။ ဆိုင်ထောင့်ထိ ခုံရော လူပါ ဒလိမ့် ကောက်ကွေး..။ ကြွေခွက်ဖြင့် ကောက်ပစ်မိလိုက်သေးသည်လား ကျွန်တော် ကောင်းကောင်း မမှတ်မိ..။ ရဲကျော် ဘေးက သူငယ်ချင်းက ကျွန်တော့်ကို ဆွဲသလိုလိုနှင့်ဝင်ချုပ်သည်..။ နောက်စေ့ဖြင့် ပြန်တိုက်လိုက်၍ ပြန်လန်သွားသည်..။ နောက်တော့ ချုပ်သည့်ကောင်က တစ်ချက်ထိုးသည်။ ခေါင်းငုံ့လိုက်၍ ချိုစောင်းကို ထိသည်.။
အခြေအနေတွေ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်ကုန်တော့ ကျွန်တော်ဘော်ဒါ ဖြိုးပိုင်ကိုတို့၊ ပြည့်ဖြိုးမောင်တို့က ဝိုင်းဆွဲကြသည်..။ DSTA က အစ်ကိုတွေကပါ ဝင်ဆွဲကြတော့ အားလုံးပြီးသွားပြီး အိပ်ဆောင်သို့ ပြန်လာကြ သည်.။ ကျွန်တော် အိပ်ဆောင်ရောက်ပြီး သိပ်မကြာခင် ရဲကျော် ကျွန်တော့် အခန်းကို ရောက်လာသည်.။ နောက်တော့ အပြန်အလှန် စကားပြောရင်း စိတ်ပြေသွားကြသည်..။ နောက်ထပ် ထိုးဖို့လည်း မလွယ်တော့။ အဆောင်မှာမို့ ဆွဲမယ့်သူတွေက အရံသင့်စောင့်နေကြသည်ကိုး..။ လူကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နောင်တ ရနေပါသည်.။ အလစ်အငိုက်လုပ်ခဲ့သည့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ယောကျာ်းမပီသမှုအတွက် ရှက်ရွံ့နေမိပါသည်.။
နောက်ရက် မနက်ကျတော့ တန်းပေါင်းစီမှာ တပ်ရေးဗိုလ်ကြီးက သမပါတော့သည်..။
“ မနေ့က ဗျူဟာဆိုင်မှာ ရန်ဖြစ်တဲ့ အရာရှိ (၂) ယောက်ထွက်လာခဲ့”
ထွက်သွားတော့ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း..။ ရဲကျော်က မနက်ခင်း တာဝန်တစ်ခုဖြင့် ဂိုဒေါင်ကို ရောက်နေသည်..။
ဘယ်ဖက်ပါးတစ်ခြမ်း ပူထူသွားသည်.. ။ အပြစ်က စိတ်ထဲမှာ နောင်တရနှင့်ပြီး ဖြစ်၍ အရိုက်ခံလိုက်ရမှ ကျေနပ်သလိုလို၊ နေသာထိုင်သာရှိသလိုလို ဖြစ်သွားသည်..။ မာစတာပါသလား အရင်မေးသည်မှာ ယခင် ပြဿနာအနည်းငယ် ဖြစ်သူတိုင်း မာစတာပါသူများ ဖြစ်နေ၍ မာစတာပါသူများ သင်တန်းမှ စောစောပြန်ရမည်ကို သိ၍ အပြစ်ဖောက်တတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်..။
ညဖက် Study ဝင်တော့ သင်တန်းမှူးထံ သူငယ်ချင်း(၂) ယောက် PT dress ဖြင့် တန်းအပ်ရသည်.။ တန်းစီရာပေါ်တီကို လှေကားထစ်ကို နှစ်ယောက်သား ပခုံးဖက်၍ အတက်အဆင်း ခုန်ရသည်..။ အတက်အဆင်း(၁၀၀) ပြည့်လျှင် သတင်းပို့ သည်.။ ထိုင်ထ(၁၀၀) ဆက်လုပ်သည်.။ ထိုင်ထ(၁၀၀) ပြည့်လျှင် သတင်းပို့သည်၊ အတက်အဆင်း(၁၀၀) ပြန်ခုန်ရ ပြန်သည်..။ Limit မရှိ..။ အခြားသူများ Night study ၃ နာရီပြည့်၍ ထွက်လာတော့မှ တန်းဖြုတ်ပေးတော့သည်..။ တန်းဖြုတ်ပေးချိန်တွင် နှစ်ယောက်သား ညဖက်ကြီး ရေချိုးကန်ဘေးမှာ ချွေးတစ်လုံးလုံးနှင့် ရေချိုးရင်း အပြန်အလှန် တောင်းပန်စကား ဆိုကြသည်..။ ထိုအချိန်မှ စ၍ သင်တန်းဆင်းချိန်အထိ ရဲကျော်နှင့် ကျွန်တော် အတော်ပင် တွဲမိသွားတော့သည်..။
သင်တန်းမှာ မထင်မှတ်သူများနှင့်လည်းဆုံရသေးသည်…။ သင်တန်းစဝင်ခါစ ကျွန်တော်တို့ ပြင်ဦးလွင် အလက(၁) မှ ကိုရဲမင်းဦးနှင့် ဆုံသည်.။ သူ(၈)တန်းမှာ ကျွန်တော်(၆) တန်း၊ သူက DSTA တက်ရာ ကျောင်းဆင်း တော့ အတူတူဆင်းကြသည်..။ ဝိုင်အိုမှာ ပြန်ဆုံမိကြသည်..။ တန်းခွဲချင်းလည်း အတူတူကိုး.။ နောက်တစ် ယောက်က ကျွန်တော့် စီနီယာလည်းဟုတ်၊ အစ်ကိုလည်း ဟုတ်သော ကိုထက်ဇာနည်(စတသ-၄၆)ဖြစ်သည်..။ အောက်ဗျူဟာဆိုင်မှ ပြန်တက်လာချိန်တွင် သင်တန်းကျောင်းရှေ့က လမ်းမှာ ဆုံဖြစ်ကြသည်..။ တွေ့တွေ့ချင်း တအံ့တသြနှုတ်ဆက်ပြီး.. ညီအစ်ကိုတွေ မပြန်ခင် အောက်ဆိုင်မှာ စားကြသောက်ကြ သေးသည်.။ ကျွန်တော်က တော့ ထုံးစံအတိုင်း ယမကာ မသောက်ဖြစ်ခဲ့ပါ..။ နောင်တော်ကျွေးသော ထမင်းကိုသာ စားဖြစ်ခဲ့ပါသည်..။
သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်နှင့် ကံမဆုံသော ကျွန်တော်မှာ သင်တန်းဝက်ရောက်ချိန်မှာပင် သင်တန်းကျောင်းမှ တပ်ခေါက်ပြီး ပြန်ခဲ့ရပါတော့သည်..။ အကြောင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ မာစတာပါသူ များကို မဟာသိပ္ပံအရည်အချင်းစစ်သင်တန်းအချိန်မီ တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် ခြေလျင်တပ်စုမှူးသင်တန်း အပတ်စဉ်(၁၈၀) ခေါ်ယူလိုက်ခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်.။ ထို့ကြောင့် သင်တန်းခုလတ်၌ ပင်ရပ်နားခဲ့ရပြီး အမှတ်တရများစွာရှိသော တောင်ညိုမြေမှ အမှတ်တရများစွာရှိသော ရပ်စောက်မြေသို့ ခရီးဆန့်ခဲ့ရပါတော့သည်..။
Posted by မိုးသက် at 7:39 PM2comments Read more
Labels: ကျွန်တော့်အကြောင်း, ရင်တွင်းဖြစ်တည်မှု...
Land Rover ကားကလေးသည် ကွန်ကရစ်လမ်းမပေါ် ပြေးလွှားနေပါသည်..။ ထိုလမ်းကိုပန်းခင်းလမ်း ဟု ခေါ် ကြောင်း ကျွန်တော့် အဒေါ်၏ အမျိုးသား ဗိုလ်မှူးက ပြောပြသည်..။
“ဒါကတော့ နေပြည်တော်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်ပေါ့ကွာ… နောက် မင်းတပ်မှာအနေကြာသွားတဲ့အခါ တပ်ရင်းမှူးဆီ သတင်းပို့ပြီး တို့ဆီ ညအိပ်ညနေ လာလည်ပေါ့…”
နေပြည်တော်ရဲ့ ကားလမ်းမကြီးက တကယ်ပင် အကျယ်ကြီးတွေဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုကတော့ အတော် ပင်ပူသည်။ မိမိကကားဖြင့်သွားနေသော်လည်း နေပူစပ်ခါးမရှောင် ထမ်းပိုးနေသည့် ဘဝတွေကို မြင်ရတော့ စိတ်ထဲက တစ်မျိုးတစ်မည် ဖြစ်မိသည်..။ မိမိမှာ ဝန်ထမ်းသားသမီး ဖြစ်ပါလျက် မကောင်းမြစ်ထာ၊ ကောင်းရာ ညွှန်လတ်၍ အတတ်သင်စေခဲ့သည့် မိဘများ၊ သင့်ရာအပ်ပို့ ခဲ့သည့် ဆရာများကြောင့် မိမိဂုဏ်ယူနိုင်သော တိုင်းပြည်ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ဖြစ်နေသည်ကို သတိရသည်…။ မိမိ ပထမဆုံးကြုံရမည့် တပ်နှင့်ပတ်သတ်၍ စဉ်းစားမိတော့ နည်းနည်းတော့ စိုးရိမ်မိနေသေးသည်..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ… ငါအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး အဆင်ပြေမှာပါ..။
“ ဒါက အင်းဝဘဏ်.. မင်းတို့ လခ ထုတ်ရင် ဒီမှာ ထုတ်ရမယ်.. ဒါနဲ့ ချက်စာအုပ်က အိမ်ကိုပေးထားခဲ့ တာလား”
“မပေးခဲ့ဘူးခင်ဗျာ ကျွန်တော် ယူလာပါတယ်…”
“အေး… အသောက်အစား၊ အပျော်အပါးရှောင်ပေါ့ညီလေးရာ… တပ်မှာ ဖြစ်သမျှ ဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ ၉၀ ရာနှုန်းက အရက်ကြောင့်ကွ …”
“တောင်ညိုထိတော့ ငါတို့မပို့တော့ဘူးကွာ… မင်းကို တောင်ညိုကားပေါ်တင်ပေးလိမ့်မယ်… အဲဒီမှာ မင်းတို့ တပ်က လုံခြုံရေး ဂိတ်က လမ်းပေါ်တင် ရှိပါတယ်…”
“ဟုတ်ကဲ့ ဗိုလ်မှူးခင်ဗျာ ရပါတယ်..”
ပျဉ်းမနား ဈေးဖက်ကို ကွေ့ဝင်လိုက်သည်..။ ပျဉ်းမနားဈေးက အတော်ပင်စည်ကားသည်..။ ရာသီဥတု ပူပူထဲက ဘဝတွေ ထပ်တွေ့ရပြန်သည်..။
ရွှေမြို့တော် ဟု ရေးထားသော Lite Ace ပစ်ကပ်ကားတွေတွေ့သည်..။ တောင်ညို ဟု ရေးထားသည်..။ ကားပေါ်က မိမိသံသေတ္တာကို ကားသမားနှင့် တောင်ညိုကားက ဆရာ အတူမတင်ကြသည်..။
“ဗိုလ်ကြီးသေတ္တာကြီးက လေးလှချည်လား.. အတော်မ ယူရတယ်..”
ကားဆရာက မချိုမချဉ် ဆိုတော့ ဘူတာက အထမ်းသမားကြီးကို သတိရမိပြန်သည်…။ ကျွန်တော့်ကို လိုက်ပို့သည့် အဒေါ်တို့ လင်မယားလည်း ပြန်သွားသည်…။ ခေါင်းခန်းမှာ နေရာရသည် ဆိုတော့ ရှေ့မှန်ကို ဖြတ်၍ နေစူးနေသော မျက်နှာကို အုပ်၍ ပူစပ်ပူလောင် ထိုင်နေရသည်…။
“ကျော်လင်းရေ ဒီမှာ ရှေ့မှန်ကို တာလပတ်စလေး ခဏ အုပ်ထားပေးဦး.. ရှေ့ခေါင်းခန်းထဲက ဗိုလ်ကြီး နေပူမစိုးလို့….”
“ရပါတယ်ဗျာ ထားလိုက်ပါ…၊ ဒါနဲ့ တာလပတ်စ အုပ်ဦးမယ်ဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ကားက ကြာဦးမှာလား…”
“ကြာတော့ မကြာပါဘူး.. မိနစ် နှစ်ဆယ်လောက်ပေါ့.. ဗိုလ်ကြီး .. ဟိုဟိုသည်သည် ဈေးခဏ ပတ်ချင်လည်း ပတ်ပေါ့… နောက်မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်မှ ပြန်လာခဲ့ပေါ့ဗျာ… ဒီမှာ ထိုင်နေရတာ နေပူပါတယ်”
သို့နှင့် ပျဉ်းမနားဈေးထဲ ဟိုဟိုသည်သည်ပတ်ပြီး Mp4 player လေးတစ်ခု ဝယ်ဖြစ်ခဲ့သည်.။ ကျန်တာတော့ ဘာမှ မဝယ်ဖြစ်..။ ဈေးတစ်ပတ်ပတ်ပြီး ကားပေါ်တက် ကားစထွက်နှင့် ခရီးဆက် ဖြစ်ခဲ့ပြန်လေသည်.။
တောင်ညိုလမ်းတစ်လျှောက်လုံး မိမိစကားမပြောဖြစ်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ဆိုင်က မေတ္တာလက်ဆောင် သွင်းပေးလိုက်သော သီချင်းများနားထောင်ရင်းပင် လိုက်ပါလာသည်..။ လမ်းတစ်လျှောက် ဟိုငေးသည်ငေးဖြင့်..။ “ရှု မဆုံးတော့သည်.. စိမ်းလဲ့လဲ့သစ်ပင်.. လယ်ကွင်းတွေက တမျှော်တခေါ် စိုပြည်လွင်” ဆိုသည့် သီချင်းကို စိတ်တွင်းမှာ သတိရသည်..။ ချက်ချင်းပင်မိမိအတွေးကို ဘရိတ်ပြန်အုပ်သည်..။ သည်အရပ်က လယ်ကွင်းတွေက တမျှော်တခေါ် စိုက်ကြသည်မဟုတ်..။ လယ်ကွင်းတွေကိုလည်း အနည်းအပါးသာတွေ့ရသည်..။ ဖုန်ကတော့ အတော်ပင်ထူသည်..။ ကျွဲရှင်းရွာဆိုသည့် ဆိုင်းဘုတ်မှစ၍ ကားပြတင်းမှန်ကို ပိတ်လိုက်ရသည်..။
“ဖုန်ကတော့ လွှတ်ပေါတယ် ဗိုလ်ကြီးရေ…”
ကားဆရာက မမေးပါပဲလျက် အားနာဟန်ဖြင့်ဆိုသည်..။ “လွှတ်” ဆိုသည့်စကားမှာ အင်မတန်၊ အဆမတန်၊ အလွန် စသည့် ဒေသန္တရစကားဖြစ်သည်..။ ဒီအရပ်မှာက မျှစ်ချဉ်ကို မျှစ်ရှင် ဟု ခေါ်ကြသည့်အရပ် ပေကိုး..။
မအူလေးပင်၊ မရမ်းခုံ စတာတွေ ကျော်လာပြီးမှ တောင်ညိုကို ရောက်သည်..။ တောင်ညိုကိုရောက်တော့ ညနေ စောင်းနေပြီ..။
“ဗိုလ်ကြီး ဒါဗိုလ်ကြီးတို့ တပ်က ဂိတ်ပဲ…”
ကားဆရာက ကားကို ဂိတ်နားလမ်းဘေးမှာ ကပ်ချပြီး ဆိုသည်..။
“ဆရာကြီး ဒီမှာ ဆရာကြီးတို့ တပ်က ဗိုလ်ကြီး အသစ်တစ်ယောက်ပါတယ်…”
ဂိတ်တဲထဲက စွပ်ကြယ်နှင့် တစ်ယောက် သေတ္တာကိုလာမသည်..။
“အာ.. ဗိုလ်ကြီး ကျနော်က ဆရာကြီး မဟုတ်ဘူး. တပည့်ပါ… ”
စစ်တက္ကသိုလ်မှာရှိစဉ်အခါက အခြားအဆင့်မှန်သမျှကို ဆရာကြီးဟုသာ ခေါ်ခဲ့ဖူးသည်..။ စစ်တက္ကသိုလ်က စစ်သည် အသိုင်းအဝိုင်းအများစုက လူကဆရာကြီး မဟုတ်လျှင်ပင် မိမိဖာသာဆရာကြီးတွေ မဟုတ်လား။ သည်တော့ ကျွန်တော် လွဲမှားသည်မှာ ထူးတော့ မထူးဆန်း..။
ဂိတ်တဲထဲမှာ ရှပ်အင်္ကျီအဖြူနှင့် ရူပါသန့်သန့် အရာရှိတစ်ဦးက ကြိုဆိုသည်..။
“အေး ညီလေး ထိုင်ကွာ.. ကိုယ်တို့တုန်းကလည်း အမှတ်(----)လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်း ကြီးကို ခုလိုပဲ ပေကြောင်ပေကြောင်နဲ့ ရောက်လာခဲ့တာပေါ့ကွာ… ခဏနေ တပ်က လာကြိုလိမ့်မယ် ကိုယ် ဖုန်းဆက်ထားတယ်…”
သူဘယ်အပတ်စဉ်ကလည်းတော့ ဗိုလ်လောင်းဘဝ စစ်တက္ကသိုလ် အမေ့ဝမ်းမှ ကျွတ်ခါစ ဝက်စ်မိ နေသေး ၍ မမေးရဲသေးပါ..။ ပြောပုံဆိုပုံအရတော့ စီနီယာပိုင်းထဲက တစ်ဦးဟုတော့ သုံးသပ်လိုက်မိသည်..။ (နောင်အခါသိရသည်မှာ ထို အစ်ကိုမှာ ငမိုးတို့ထက် တစ်ပတ်စဉ်သာကြီးသော နောင်တော် ကိုရန်နိုင် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုအခါမှ ပြန်ပြောမိရင် ညီအစ်ကိုတတွေ ရယ်မောရသေးသည်…။)
ခဏကြာတော့ တပ်ကကားလာကြိုသည်…။ တပ်ပေါ်ရောက်တော့ တပ်မှာ မီးတွေပျက်နေသည်..။
အရာရှိ ရိပ်သာရှေ့မှာ ကားရပ်ပြီး အထုပ်အပိုးတွေချသည်..။ ကျွန်တော့် အတွက် အစွန်ဆုံးက အခန်းတစ်ခန်းရသည်.။ ပစ္စည်းများချပြီး ရိပ်သာက ထမင်းချက်ရဲဘော်က အိပ်ရာခင်း၊ အခန်းတွင်း သန့်ရှင်းရေး လာလုပ်ပေးသည်..။
“ရဲဘော်ရှားတော့ Best Man မပေးနိုင်တော့ဘူးဗိုလ်ကြီးရ..။ ဗိုလ်ကြီးတို့ ဗိုလ်ကြီးအသစ် ၅ ယောက်အတွက် ကျွန်တော်က Best man ပဲ.. ဗိုလ်ကြီး ခိုင်းစရာရှိရင် တပည့်ကို ခိုင်းပါ.. ခဏလေး ဗိုလ်ကြီး ကျွန်တော် ဖယောင်းတိုင် သွားထွန်းလိုက်ဦးမယ်…”
“ဟုတ်ပြီ.. ဒါနဲ့ မင်းနာမည်ဘယ်သူလဲ…”
“ကျွန်တော့်နာမည် လွင်ဦးပါ ဗိုလ်ကြီး…”
ကျောင်းဆင်းခါစက ထုတ်ပေးလိုက်သည့် အရာရှိ လက်စွဲစာစောင်မှာ ရဲဘော်များက နာမည်ခေါ်တာကို ကြိုက်သည် ဟု ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးထားသည်…။ အထက်အရာရှိက မိမိနာမည်ကို ဂရုတစိုက်မှတ်သားထားသည်ကို သဘောကျသည့် သဘောပင်ဖြစ်သည်..။
လောလောလတ်လတ် ခင်းထားသည့် အိပ်ရာပေါ်မှာမှောင်မည်းမည်းနှင့် လှဲနေရင်း ဖယောင်းတိုင် ကိုစောင့်နေမိသည်.။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မိမိနှင့် စတင်မိတ်ဆက်လာသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်ကို စူးစမ်းနေမိသည်..။ အရာရှိရိပ်သာ မှ တစ်ဖက်သည် ကျွန်းတောကြီး သက်သက်ဖြစ်သည်.။ ပဲခူးရိုးမထိ ဆက်သွားသည်လား ကျွန်တော်မပြောတတ်..။ တောင်တောင်အီအီတွေးနေရင်းမှာပင် ရ်ိပ်သာရှေ့မှာ ဆိုင်ကယ် ရပ်သံကြားလိုက်ရသည်..။
“ ဟေ့. ဟိုကောင်လေး.. လွင်ဦး.. လာဦး”
“ဟုတ်ကဲ့ဗိုလ်ကြီး.. ဒီမှာ ဟိုက အသစ်ရောက်လာတဲ့ ဗိုလ်ကြီး အခန်းကို ဖယောင်းတိုင် သွားပို့လိုက် ဦးမယ်.. ”
“ဒီကောင်တွေက မနက်ဖြန်မှ သတင်းပို့ရမှာမဟုတ်လား.. ရတယ် သွားမပို့နဲ့တော့ ငါသူ့ကို တပ်က သက်သာဆိုင် ခေါ်သွားလိုက်မယ်.. သူ့ကို သွားခေါ်ချေ…”
လွင်ဦး လာခေါ်ချိန်အထိ ကျွန်တော် မစောင့်တော့ပါ..။ အခန်းပြင်သို့ထွက်ပြီး ပေါ်တီကိုဆင်ဝင်အောက် ဆိုင်ကယ်အထိ ထွက်လာခဲ့လိုက်တော့သည်..။
“ ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကိုကြီး ကျွန်တော် ဟိန်းလင်းထွန်းပါ. ၅၂ ကပါခင်ဗျ…”
“ အော် အေးအေး ရိပ်သာမှာ မီးလည်းပျက်နေတယ်.. လာငါနဲ့ သက်သာဆိုင်လိုက်လာခဲ့ ဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်… ဟိုရောက်တော့ စကားအေးအေးဆေးဆေး ပြောကြတာပေါ့ကွာ..”
ဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်ပြီး ရိပ်သာကထွက်ခဲ့ကြသည်..။ ရုံးနှင့်ရိပ်သာကြား အောင်ဇေယျ ရိပ်သာ ဆိုသည့် အဆောက်အဦးရှေ့မှာ ခဏရပ်သည်…။
“ညွန့်ဝင်း ပြန်ရောက်နေပြီလား မသိဘူး.. ဒီကောင့်ဆိုင်ကယ်ရပ်ထားတာတွေ့တယ်.. ညွန့်ဝင်းရေ.. ညွန့်ဝင်း.. ”
အစွန်ဆုံးအခန်းတံခါးပွင့်သွားပြီး.. စွပ်ကျယ်အဖြူ၊ ယူနီဖောင်းဘောင်းဘီဖြင့် အဝတ်အစားလဲရင်း တန်းလန်း အရာရှိတစ်ဦးထွက်လာသည်..။
“ကျွန်တော် တိုင်းရုံးက အခုမှ ပြန်ရောက်တာ သက်သာဆိုင်သွားမလို့မဟုတ်လား.. အစ်ကိုတို့ သွားနှင့်ကြလေ.. ကျွန်တော် နောက်မှပဲ လိုက်လာခဲ့မယ်…နောက်က ရောက်လာတဲ့ အငယ်လေးလား..”
“အေးဟုတ်တယ်.. ဒါဆို မင်းပြီးမှသာ အေးအေးဆေးဆေးလိုက်လာခဲ့တော့…”
နှစ်ယောက်သား ဆိုင်ကယ်နှင့် ဆက်သွားကြသည်..။ တပ်ပေါက်ဝကို ကျော်ပြီးမှ ဖယောင်းတိုင်မီးတွေ ထွန်းထားသည့် ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ရောက်သည်..။
“ဟော.. ဗိုလ်ကြီးမင်းထက်တို့ လာပြီ…”
ဆိုင်တွင်းသို့ ဝင်ထိုင်ကြသည်..။ ဆိုင်က ကော်ဖီမစ်နှင့် အအေးလောက်၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်လောက်သာ ရမည့် အိမ်ဆိုင်သာသာ ဖြစ်သည်..။ စောစောက ဆိုင်ထဲက အမျိုးသမီးကြီး ရေရွတ်သံအရ မိမိကို ခေါ်လာသူမှာ ကိုမင်းထက် ဖြစ်ရမည်..။
“ကဲ ထိုင်… ဒေါ်ရခိုင်မ ဆေးလိပ်တစ်ပွဲနဲ့ ကော်ဖီ (၂) ခွက် ချ ဗျာ..”
သို့နှင့် မိမိတို့ စကားပြောဖြစ်ကြသည်..။
“ဆိုစမ်းပါဦး မင်းက ဘယ်နယ်ကလဲ…”
“ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကိုကြီး ပြင်ဦးလွင်ကပါခင်ဗျ…။ အဖေက စစ်တက္ကသိုလ်ရူပဗေဒဌာနက ဓာတ်ခွဲခန်းမှူး ဒုအရာခံဗိုလ်ပါ..”(ထိုစဉ်က အဖေဒုအရာခံဗိုလ်ကာလဖြစ်သည်)။
“ အေး မင်းတို့တော့ ငါနဲ့ စတွေ့တာပဲ…။ ငါ့နာမည်တော့ သိပြီမဟုတ်လား…”
“ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကိုကြီး .. ကိုမင်းထက်ပါ…”
“အေး.. မင်းတို့စစ်သည်တော်ကျင့်ဝတ်တွေ၊ ဆောင်ပုဒ်တွေကျက်ထား.. အထူးသဖြင့် စစ်သည်တော် ကျင့်ဝတ် .. တစ်ခြားသိသင့်တာတွေလည်း ကျက်ထား.. မင်းတို့ ဒုဗိုလ် ၅ ယောက် ဆုံတဲ့အခါ ငါမေးမယ် ကြားလား..”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ . အစ်ကိုကြီး..”
“နံပတ်တွေရော တွဲပြီးတော့တော့ မကျက်ဖူးဘူးခင်ဗျ..”
“အေး နံပတ်တွေရော ကျက်ထား.. ငါက အားရင် အားသလို တွေ့ရင် တွေ့သလို စာမေးတတ်တယ်..၊ မှတ်ထား .. နောက်ပြီး ငါက နောက်ကျတာမကြိုက်ဘူး၊ ယူနီဖောင်း စုတ်ပြတ်နေအောင် ဝတ်တာ မကြိုက်ဘူး..။ မင်းတို့ အရာရှိ ဖြစ်နေပြီ.. အရာရှိနဲ့ တူအောင်နေ..။ မင်းတို့ ဗိုလ်လောင်းဘဝ ဘယ်လိုပဲ နေခဲ့နေခဲ့.. အရာရှိဖြစ်ပြီး အရာရှိလို မနေရင် ငါနဲ့တွေ့မယ်.. ကြားလား .. ဆိုစမ်းပါဦး.. ရသေးရဲ့လားလို့… စစ်ဝတ်တန်ဆာ ဝတ်ဆင်ရခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး ဘယ်နှချက်ရှိလဲ.. ”
“ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ…ဆယ်ချက်ရှိပါတယ်… စည်းဝန်ပွားများ၊ စိတ်မြင့်မားတက်၊ တပ်ဂုဏ်မြှင့်ပြု၊ ညီစည်းမှုရ၊ သပ်နစ်ကျနှင့်၊ တပ်သားအချင်းချင်း၊ မခွဲခြားခြင်းဖြင့်၊ လွယ်စွာလှုပ်ရှား၊ ခေါင်းဆောင်ထား၊ ရာမှတ် ခြင်ယင်ဆူးညှောင့်ခလုတ်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ထား၊ စစ်ဝတ်ဝတ်ခြင်း ကျေးဇူးများ ပါ..။ ”
“အေး.. မင်းမဆိုးဘူးကွ… ငါမေးဖူးတဲ့ထဲမှာ အများဆုံးမှန်ဖူးတာ ဆယ်ချက်ဆိုတာပဲ မှန်ဖူးတယ်… အချက်တွေ မပြောပြတတ်ဘူး..”
နောင်တော်က ချီးကျူးတော့ နည်းနည်းတော့ ပီတိဖြစ်မိပါသည်..။ တကယ်တော့ အထက်ပါကဗျာမှာ မိမိ ကိုယ်တိုင် ရေးပြီး ကျက်ထားခြင်းဖြစ်၍ စွဲနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်..။
ခဏကြာတော့ ကိုညွန့်ဝင်းရောက်လာပါသည်…။ သူ့က တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ် အပတ်စဉ် (၉) မှ ဆင်းသူ ဖြစ်သည်.။ လက်ရှိ တပ်ထောက်ဗိုလ်ကြီးတာဝန်ယူထားသူ ဖြစ်ပါသည်..။
မီးလာတော့ ဆိုင်ထဲက ကလေးတွေ အော်ကြသည်…။ တီဗွီဖွင့်သူဖွင့်၊ ခုံဆွဲသူဆွဲ… ။ မိမိကတော့ ခုမှ ရောက်သူ ဖြစ်၍ ကော်ဖီကိုသာ ငုံ့သောက်နေမိသည်..။
“ညီလေး… ဆေးလိပ်သောက်တတ်ရင် သောက်…”
ဆေးလိပ်တစ်လိပ်နှိုက်၍ ပါးစပ်မှာတပ်ပြီး မီးညှိသည်..။
“ဆေးလိပ်လည်း သောက်တတ်တာပဲလား..။ အရက်ရော သောက်လား..။ ”
“ဟုတ်ကဲ့ တစ်ခါတစ်လေတော့ ကြုံတဲ့အခါမျိုးမှာ သောက်ပါတယ်.. ကိုယ့်ဖာသာတော့ ရည်ရွယ်ပြီး သောက်လေ့မရှိပါဘူး…”
“မင်းကောင်လေးတွေက ချိုလေးတွေနဲ့ ညွန့်ဝင်းရေ… ကြိတ်ထားမှ တော်ကာကျမယ်…”
စီနီယာက ပြုံးစိစိ ဖြင့် ဆိုသော်လည်း … ကျွန်တော်ကတော့ မချိပြုံးနှင့်ပါ..။ တကယ်တော့ ကျွန်တော် တပ်မှာ ရှိခဲ့သည့် တစ်နှစ်ခွဲခန့် ကာလ အတွင်း အရက်တစ်ခါမှ မသောက်ခဲ့ကြောင်းပါ…။
နောက်ရက် မနက်ကျတော့ ကျွန်တော်တို့ အပတ်စဉ်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ထပ်ရောက်လာသည် အောင်ဇေယျက ဆင်းသည့် စည်သူအောင်၊ နောက်တော့ အလျှိုလျှိုထပ်ရောက်လာပြီး လူစုံသွားသည်…။ နောက်ရက် မနက် တပ်မမှူးနှင့်တွေ့ပြီး တပ်မမှူးက စကားပြောသည်…။ နောက်တော့ တပ်ပြန်လာပြီး ကိုယ်စီ တာဝန်များ ခွဲဝေကြသည်..။ စည်သူအောင်က ဗဟိုကင်းနှင့် တပ်ရင်းသာယာလှပရေး၊ ရဲအောင်က လယ်၊ ငြိမ်းဇော်ဦးက ကြက်ခြံ၊ ရဲလွင်မျိုးက ရိပ်သာ၊ ကျွန်တော်က ရုံးနှင့် ကွန်ပျူတာ တာဝန်ခံ..။
တပ်မှာနေရင်း အငြိမ်းမနေ..။ အားနေလျှင် ကျွန်တော် စာဖတ်သည်..။ နေ့ခင်းနေ့လည် ပူအိုက်သော အချိန်တွင် ဘယ်လောက် အိပ်ချင်အိပ်ချင်၊ ဘယ်လောက် အလုပ်ပါးပါး ကျွန်တော် ရိပ်သာမပြန်၊ လက်ဖက်သုတ်တစ်ပွဲ၊ ဆေးလိပ်တစ်ပွဲ၊ ကော်ဖီတစ်ခွက်နှင့် စာဖတ်သည်..။ (LCD မဟုတ်သော ကွန်ပျူတာ Screen မှ စာတွေ လှိမ့်ဖတ်ရင်း မျက်စိမှုန်သထက်မှုန်လာသည်ကို မာစတာတက်ရင်း ဆေးစစ်မှ မိမိ မျက်လုံးအခြေအနေကို သိရတော့သည်) ရုံးကကွန်ပျူတာထဲတွင် မာစတာ တက်နေသော အပတ်စဉ်(၅၀)မှ အစ်ကိုထည့်သွားသည့် ကွန်ပျူတာ စာအုပ်တွေဖတ်သည်..။ ကျောင်းဆင်းခါနီး ကွန်ပျူတာမေဂျာက သူငယ်ချင်း မိုးမင်းဇော် ဆီက တောင်းလာသည့် HTML စာအုပ်ကို အလွတ်နီးနီးရအောင် ဖတ်သည်..။ ကိုယ့်ဖာသာ Offline Website တစ်ခု ရေးကြည့်သည်…။ ရေးနေရင်းမှာပင် ပထမဆုံး သင်တန်း သွားရဖို့ ပေါ်လာသည်..။ ဝိုင်အို ဟုခေါ်ကြသည့် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး Young officer course ဖြစ်သည်..။ သင်တန်းက မိမိတို့ တပ်နှင့် မလှမ်းမကမ်း ..။ ကားနှင့် သွားလျှင် ဆယ်မိနစ်၊ ဆယ့်ငါးမိနစ်ထက် ပိုမသွားရ..။
သင်တန်းမှာ ပြည်တွင်းဖြစ် ပခုံးထမ်းဒုံးစနစ်ကို စသင်ရသည်..။ အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံး အပူလှိုင်း အာရုံခံစနစ်ကို ဖတ်ရတော့ ကျွန်တော် အလွန်စိတ်ဝင်စားသွားသည်..။ လက်ချာစာအုပ်တွေ ရကတည်းက သဘောကျစွာ ဖတ်သည်..။ ဒုံးယာဉ်အချက်အလက်များ၊ ဒုံးပြွန်အချက်အလက်များကား အလွတ်ရနေချေပြီ..။ ကျွန်တော်တို့ တန်းခွဲစာမေးပွဲဖြေတော့ ကျွန်တော်က နံပတ်(၁) ၊ ဒုတိယက ကျွန်တော်တို့ အပတ်စဉ်မှ လေ့ကျင့်ရေးထူးချွန်ဆုရသည့် သူငယ်ချင်း..။ ကျွန်တော်က ထုံးစံအတိုင်း ကဗျာတွေစပ်ပြီး ကျက်သည်..။ ကျွန်တော့်ကဗျာတွေကို နည်းပြ အရာရှိက သဘောကျသဖြင့် တောင်းသွားသည်..။
သင်တန်းကျောင်းမှာ သင်တန်းသားကို နည်းပြများက အလွန်ညှာတာသည်..။ ညီအစ်ကိုတွေလို ဆက်ဆံရေးပင်ဖြစ်သည်..။ တန်းစီလျှင် ပေါ်တီကိုအောက်မှာသာ စီသည်..။ ယမကာအနည်းငယ် သောက်ခွင့်ပြုသည်.။ သက်သာဆိုင်တန်းများမှာ ဝယ်၍ရသည်.. သို့သော် ကျွန်တော် မသောက်။ တကယ်တော့ မကြိုက်၍ မသောက်ခြင်းဖြစ်သည်..။ သို့ပါလျက် မိမိက မပတ်သတ်ပဲ မိမိကို လာနွယ်တတ်သည့် ပြဿနာ က မထင်မှတ်ပဲ ပေါ်လာတော့သည်..။
Posted by မိုးသက် at 6:25 PM5comments Read more